စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၀ ) ( သင် ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ထိုက်တန်နေပါသလား ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၀ ) ( သင် ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ထိုက်တန်နေပါသလား )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၀ ) ( သင် ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ထိုက်တန်နေပါသလား )
Posted by Foreign Resident on Nov 14, 2012 in Editor's Choice, Think Different | 120 comments
( ၄၀ ) ( သင် ဆင်းရဲခြင်းနှင့်
ဟိုဘက် Post မှာ ၊
အဘ မန့်ထားတာလေးကို ၊
အမှတ်တရ ကျန်ခဲ့အောင် နှင့် ၊
ထပ်ပြောချင်တာ နဲနဲ ရှိလို့ ၊
Post တစ်ခု လုပ်လိုက်တာပါ ။
Comment ကျတော့ ၊
ခဏလေး နှင့်ပျောက်သွားပြီး ၊
ပြန် ရှာလို့ မလွယ်ဘူးလေ ။
အမှန်တော့ ဟိုဘက် Post က ၊ စာရေးသူက သူ့ဘာသာသူ ၊ ရသ စာပေလေး ရေးထားတာပါ ။
အဘ မှာသာ စပ်ဆော့ပြီး ၊ အစလေးတစ်ခုကို ဖြန့်တွေးကြည့်မိနေတာပါ ။
တစ်ချို့ အဘ စကားလုံးတွေက ရက်စက်သလိုရှိပေမယ့် ၊
တစ်ခါတစ်လေ အိပ်ပျော်နေတဲ့သူကို ရေပက်နှိုးတန်နှိုးရ သလိုပေါ့လေ ။
ရွာသူားတို့လဲ လိုက်တွေးကြည့်ကြပါအုန်း ။
နောက်ထပ်ပြီးတော့ အဘ ပြောပြချင်နေတာ တစ်ခု ကတော့ ၊
အဘ တို့ငယ်စဉ်အခါ မိဘတို့ ရတဲ့ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာ ဝန်းကြီးထဲမှာ ၊
ရာထူးတူ / သိပ်မကွာတဲ့ အရာရှိငယ် မိသားစုပေါင်း မြောက်များစွာ အတူနေခဲ့ရပါတယ် ။
တခြား အရာရှိငယ်တွေက ညနေ ၅ နာရီလောက်ဆိုရင် ရုံးဆင်း ၊ ရေမိုးချိုး ၊
ညနေ ၆ နာရီလောက်ဆိုရင် အစိုးရကပေးတဲ့ ကားလေးနှင့် သူတို့မိသားစုကိုတင်ပြီး ၊
မြို့ထဲသွား ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့် ၊ ကြေးအိုးသောက် ၊ ပျော်ကြပါးကြပေါ့လေ ။
အဲဒီ ခေတ် အခါတုန်းက ဓါတ်ဆီ ကလည်းပေါတာကိုး ။ မာဇဒါဂျစ် တစ်စီး တစ်လ ဂါလံ ၈၀ ရတယ် ။
ရုံးဝင်းထဲမှာတင် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတွေက ရှိနေတော့ ဒီဆီတွေ ဘယ်နားသွားသုံးမလဲ ။
ဇနီး မယားတွေ အားလုံးလောက်နီးနီးက အလုပ်မလုပ်ပဲ ယောက်ျား လုပ်စာ ထိုင်စားကြပါတယ် ။
စားလို့လဲလောက်တယ်လေ ၊ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိ လစာ ၄၅၀ ဆို ၊ ရွှေတောင် ဝယ်စုနိုင်သေး ။
အဲဒီအချိန်မှာ အဘ အဖေ ရော အမေ ရောရဲ့ နေ့စဉ် အစောဆုံး အိမ်ပြန်ချိန်က ည ၉ နာရီပေါ့ ။
အဲဒီ အချိန်မှာ အဘ အဘွား ကလည်း အိုကြီးအိုမ တုန်ချိတုန်ချိ နှင့် ၊
ဘတ်စကားစီးပြီး မြို့ထဲက တရုတ်ကျောင်းမှာ စာသွားပြ ပိုက်ဆံရှာနေတုန်း ။
အဲဒီတုန်းကဆို အဲဒီ ကတော်တွေက ၊ အဘ အမေ အလုပ်လုပ်နေတာကို အတင်း ပြောကြတယ် ။
မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဟိုဘဝက ” ဝဋ် ” ပါလာလို့ အလုပ်လုပ်နေရတာ ၊ သနားပါတယ် တဲ့ ။
အဘတို့ ညီအကိုတွေမှာလဲ မချောင် ၊ တစ်ခါငှား ၅ ပြား/၁၀ ပြားကျတဲ့ ကာတွန်းအဟောင်းပုံထဲက ၊
ကာတွန်း တစ်အုပ်ငှားချင်ရင်တောင်မှ ၊ အဖေက ကွက်ပေးထားတဲ့ ၁၀ ပေ ပတ်လည်မြေကွက်ကို ၊
မြက် ပြောင်အောင် ရိတ်ပြီးမှ ၅ ပြား / ၁၀ ပြား ဖိုး ကာတွန်း တစ်အုပ် ငှားပေးတာပါ ။
ထားပါတော့ ၊ အဲဒီလိုနှင့် သွားနေလိုက်တာ ၊ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခု / ၃ ခု ကြာလာရော ။
အဘတို့ ညီအစ်ကိုတွေ အားလုံးက သူတို့ရဲ့ Field အသီးသီး မှာ အောင်မြင်လာတယ် ။
လွယ်လွယ်ပြောရရင် ( အိမ်ဖေါ်ကလွဲရင် ) ၊
အဘတို့ အိမ်ရှိလူကုန် အောင်မြင် ချမ်းသာလာတယ် ဆိုပါတော့ ။
အဲဒီတုန်းက ဝန်းခြံကြီး တစ်ခုထဲမှာ ၊ အတူတူကြီးပျင်းလာကြတဲ့ အထဲမှာ ၊
တခြား အောင်မြင် ချမ်းသာလာတာ ဆိုလို့ ၊ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ ကလွဲလို့ မရှိ ။
အဘတို့လို ၊ တစ်မိသားစုလုံး အိမ်ရှိလူကုန် အောင်မြင် ချမ်းသာလာတာ ၊
သူတို့မှာ တစ်မိသားစုမှ မရှိ ။
အဲဒီအခါကြတော့ ၊ မင်္ဂလာဆောင် ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာတွေ့ရင် ပြောကြပြန်ကော ၊
အဘမိဘ တွေက ” ကံ ” ကောင်းလိုက်တာတဲ့ ။ အော် ၊ ဒုက္ခ ၊ ဒုက္ခ ။
သူတို့မှာလည်း ဘုရားဟောထားတဲ့ ” ဝဋ် ” နှင့် ” ကံ ” ဆိုတာကို ထည်လဲ သုံးတတ်လိုက်တာ ။
သူတို့ မ အောင်မြင် ၊ ဆင်းရဲဖို့ အကြောင်းပြချက်ကြီးက လွယ်လိုက်တာ ။
အဘ ကတော့ အဲဒါကို Well planned, disciplined, trained & hard working လို့ပဲမြင်တယ် ။
ရွာသူားတို့ကော ဘယ်လိုမြင်ကြလည်း ဟင်င်င်င် ။
ဒါတောင် အခု အဘ ထောက်ပြခဲ့တဲ့ အရာရှိ မိသားစုတွေဟာ ၊
အခုခေတ် လူတွေလို အရက် ၊ လောင်းကစား နှင့် စာရိတ္တ မပျက်ခဲ့ဘူး ။
သိပ် မကြိုးစားမိတာလေး တစ်ခုနှင့်ထင် ၊ နောက် နှစ်အစိတ်မှာ မြောင်းထဲ ကျန်ခဲ့ကြတာနော် ။
High Light လုပ် ထင်ရှားစေချင်တာလေးတွေက ။
၁ ။ လက်သမားချင်း အတူတူ ၊ အလုပ်ချိန်ချင်း အတူတူ ဆိုရင် ၊
၂ ။ မနေသင့်တဲ့ အဲဒီဒေသကို မစွန့်ခွာပဲ ဆက်နေမှုဟာ ၊
၃ ။ ကံ ဥာဏ် ဝီရိယ သုံးပါးထဲက ၊ ကံ မလိုက်သော်ငြားလဲ ၊
၄ ။ လက်ရှိတောမှာ မရှင်မှာ သေချာနေရင်တော့ ၊
၅ ။ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ပြောင်းလို့ ၊ ကိုယ့်လက်ထက်မှာ မချမ်းသာ/မအောင်မြင် ခဲ့ရင်တောင်မှ ၊
၆ ။ အန္တရာယ် / ဒုက္ခ ( Risk ) တွေ ရှိသော်ငြားလည်း ၊
၇ ။ တောပြောင်းဖို့ သတ္တိ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ၊
၈ ။ ဘုရားဟောထားတဲ့ ” ဝဋ် ” နှင့် ” ကံ ” ဆိုတာကို ထည်လဲ သုံးတတ်လိုက်တာ ။
၉ ။ အခုခေတ်လူတွေလို အရက် ၊ လောင်းကစား နှင့် စာရိတ္တ မပျက်ခဲ့ဘူး ။
အမှန် ကို မြင်နိုင်ကြပါစေ ။
အမှန် ကို မြင် ရဲတဲ့ သတ္တိလည်း ရှိကြပါစေ ။
အမှန် ကို ပြင် ရဲတဲ့ သတ္တိလည်း ရှိကြပါစေ ။
ချစ်လို့ ပြောတယ် မှတ်ကြပါ ။
အဘ ဖေါ ( FR ) ။
အဘဖောက စေတနာနဲ့စဉ်းစားခိုင်းနေတာ..။ မစင်းစားပဲ အတုံးလိုက်စားရင် နင် နေမှာစိုးလို့။
ဒီပို့စ်မှာ ကျုပ်က.. အခြေခံသဘောမှာ သဘောကွဲလွဲနေတာမို့.. ၀င်မပြောတာပါ..။
ဆိုတော့.. အဘဖောနဲ့ကျုပ်နဲ့..ဘာကွဲလွဲသလည်းဆိုတော့.. မြန်မာပြည်မှာမွေး..မြန်မာပြည်မှာကြီး.. အဲဒီသူတွေကို.. မြန်မာလို့သာခေါ်သင့်တယ်လို့.. ယူဆတာက စတာပါပဲ..။
လိုက်ခွဲစတန်းဆိုရင်.. တရုတ်သွေး…၅၀ရာခိုင်နှုန်း.. ၂၅ရာခိုင်နှုန်း.. ကုလား တ၀က်..။ ချင်း တစိတ်..။ကယား တနွယ် ရခိုင်တပိုင်း..မွန်နည်းနည်းနဲ့.. ..ပြီးကိုမပြီးနီုင်ပဲ.. အစိတ်စိတ်ကွဲကုန်မှာသာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီလိုခွဲတတ်အောင်.. ခွဲမြင်အောင်လုပ်တာဟာ.. အာဏာရှင်တွေက အုပ်ချုပ်ရလွယ်အောင်လုပ်တာပါ..။
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ.. တိုင်းပြည်တခုရှိရမယ်.။ အဲဒီတိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာထားရပါမယ်.။ အဲဒီလိုထားနိုင်ဖို့.. လူတွေကို” နိုင်ငံသား”ဆိုတဲ့.. စာချုပ်သဘောတူညီချက်နဲ့.. သတ်မှတ်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်..။
ကိုယ်သဘောတူထားတဲ့..စာချုပ်.. ကိုယ်ဖေါက်ဖျက်ရင်.. ဆိုင်ရာဥပဒေအရ အပြစ်ပေးခံရမယ်ဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒီကနေ.. တရုတ်ကမှကြိုးစားတာမဟုတ်.. ကုလားကမှအနှိမ်ခံရတာမဟုတ်..။ မွန်..ရခိုင်..ကချင်အကုန်တန်းတူ..
တန်းတူပေါ်မှာမှ.. အခွင့်အရေးရှိ..ကြိုးစားတဲ့သူ.. ချမ်းသာအဆင်ပြေတယ်.. ဆိုတဲ့.. အယူအဆကိုရပါလိမ့်မယ်..။
ဒီနေရာမှာ.. လူမျိုးနဲ့.. နိုင်ငံသားကိစ္စ.. ဆက်ဆွေးနွေးချင်မိပါတယ်..။ စိတ်ဝင်စားသူရှိရင်.. ပို့စ်အသစ်တင်ပေါ့..
သူကြီးကို ဒီတခါပဲ ရာနှုန်းပြည့် လုံးဝဥသုံထောက်ခံလိုက်တယ်။ ဗရာဘိုပါ ။
အဘဖောရေးတဲ့ စာတွေမှာ လူမျိုးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့ သဘောမျိုး ရေးတဲ့ စာတိုင်းမှာ တွေ့ရတယ်။ ။ သူဟာသူတော့ နည်းမျိုးစုံ စကားလုံး မျိုးစုံ အတွေးမျိုးစုံနဲ့ ချဲ့ကားပြီး လှလှပပ ရေးထားတာပဲ ။ တကယ်တန်းက ဖတ်လိုက်သူစိတ်ထဲ စာအရေးအသားဟာ ကိုယ်ရည်သွေးတယ်လို့ ( တနည်း လူမျိုး တခုကို အမွှန်းတင်ထားသလို ) တနည်းနည်းနဲ့တော့ စာဖတ်သူကို ခံစားမိစေတယ်။ ကျမအဲ့ဒါကို မကြိုက်ဖူး။ အထူးသဖြင့် သုံးတဲ့ အသုံးနှုန်းကိုပါ။
ုခုတော့ သူကြီး တချက်ပဲ ထောက်လိုက်တယ်။ သူကြီးကတော့ သူကြီးပါပဲလို့ ။
ဒါနဲ့ ရီဆိုင်ကယ် သတင်းစာလို့ နားမလည် ပါးမလည် ပြောမိတာကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပါတယ်နော်။ ဆော်ရီးပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီက weekly *ဂျာနယ် စာရွက်တွေက ပိုကောင်းသလိုလိုပဲ ဟီး
ကျုပ်ကရီဆိုင်ကယ်မဟုတ်လို့.. ရီဆိုင်ကယ်မဟုတ်ဖူးလို့.. အမှန်ပြောပြတာသာဖြစ်ပါတယ်..။ တကယ့်စိတ်ထဲက.. ရီဆိုင်ကယ်ဖြစ်ချင်တာပါ..။
ဒါကြောင့်.. ဘစ်ဇနက်ကဒ်ဆို.. ခုအသစ်လုပ်တဲ့.. ရီဆိုင်ကယ်စက္ကူနဲ့လုပ်ထားပြီး.. ကျောဖက်မှာ ရီိဆိုင်ကယ်တံဆိပ်လေးပါ.. ငွေအကုန်ခံပေးပြီး ထည့်ထားပါကြောင်း…
အဘတို့ တရုတ်သွေးပါတဲ့ လူနည်းစုတွေကလည်း ၊
အဲလို ၊ တန်းတူ ရည်တူ နေချင်တာပေါ့ကွယ် ။
မြန်မာပြည်မှာ မိဘဘိုးဘွားကအစ မွေးတာချင်းတူရင်တောင် ၊
တရုတ်စပ်လို့ဆိုပြီး သက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ် ပေးမတက်တဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ၊
ဘယ် တရုတ်စပ် ကများ ထူးပြီး ၊ ငါ တရုတ်ကွ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူလို့ ရလိမ့်မလဲလေ ။
တရုတ်စပ် ဆိုပြီး ထုတ်ပြောလို့က အနှိမ်ခံရဖို့ပဲ ရှိနေတဲ့ဟာလေ ။
ဘယ်သူကမှ တရုတ် တရုတ် ဆိုပြီး ပြောပြီး ဂုဏ်ယူ မနေချင်ပါဘူး ။
သို့သော် ၊ လူများစု ကိုယ်နှိုက်က ၊ ကျောင်းနေစဉ် ကတည်းက ၊
အဘတို့ တရုတ်စပ် တွေကို ခွဲခြားပြီး ဆက်ဆံ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တော့လည်း ၊
အဘတို့ ခမျာ သူတို့ ဆက်ဆံသလိုပဲ အသားကျနေလို့ ၊
ဒီလို တရုတ် တရုတ် ဆိုပြီး ပြောနေမိတာပါ ။
အဲဒီလိုပါပဲ ၊ ကုလားတွေလည်း ခံစားနေရတာပါပဲ ။
အမေစု ကတောင် ဝင်ပြောပေးနေရတယ် ။
ကုလားလို့ ခေါ်တာ သူတို့ မကြိုက်ရင် ကုလားလို့ မခေါ်ကြပါနှင့်လို့ ။
အဲဒါဟာ ယဉ်ကျေးမှုပါ ဆိုပြီးတော့ ။
အဘ မြင်တာတော့ ၊ အဲဒါလည်း ပြောမနိုင်ပါဘူးကွယ် ။ ဆက်ခေါ်နေကြတာပဲ ။
အဓိကကတော့ ၊ လူများစု မြန်မာလူမျိုးကြီးကိုယ်နှိုက်က လိုလိုလားလားနှင့် ၊
အခေါ်အဝေါ် အတွေးအခေါ်တွေကို ငယ်စဉ် ၊ ကျောင်းနေစဉ် ကတည်းက စပြီး ပြောင်းပေးမှ ရမှာလေ ။
အဘတို့ ၊ လူနည်းစုတွေက ဘာတတ်နိုင်မှာတုန်းကွယ် ။ သူတို့က အများစုကိုး ။
သိတာပေါ့ ။ လူမျိုး ၊ ဘာသာ ခွဲခြားခံရတဲ့ အရသာကို ။
နားလည်တာပေါ့ ။ လူလူချင်း တန်းတူညီမျှမှုကို ။
သြဇီမှာ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင်ရေးရင် ၊
လူမျိုး ၊ ဘာသာ ၊ လုံးဝ မထည့်ရဘူး ။ မေးခွင့်လည်း လုံးဝ မရှိဘူး ၊
အစိုးရကိုယ်နှိုက်က Racial & Religious Discrimination ဖြစ်မှာစိုးလို့ကို တားမြစ်ထားတာ ။
မြန်မာပြည်မှာ ၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်းထဲက ၊
တရုတ် စပ်ပါတယ် ၊ မဟာယာန ကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုပြီး ၊
ဘယ်သူ တစ္ဆေကြီး ကန်တော့ရဲလဲ ၊ ဘယ်သူ မိုးပေါ်ဘုရား ကန်တော့ရဲလဲ ။
ဒါတောင် တရုတ်စပ်က ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်းနော် ၊ ခွဲခြားခံရတာ ။
ကုလားစပ် မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်လို့ကတော့ အနှိမ်ခံလိုက်ရမှာ ပြောမနေနှင့် ။
လိုရင်းကတော့ ၊ အင်အားကြီးတဲ့ မြန်မာ အများစုက စပြင်မှ ရမယ် ။
အင်အားနည်းတဲ့ တရုတ် ကုလားက စပြင်ဖို့ အင်အားမှ မရှိတာ ။
နောက် ပြောကြပါလိမ့်မယ် ၊ အခုကျမှ ၊
အဲဒီလို ခွဲခဲ့တဲ့ အထဲမှာ ကျနော် ၊ ကျမ မပါပါဘူးလို့ ။
တကယ့်စိတ်ရင်းမှန်ရင် ၊ အဲလို ခွဲတဲ့သူတွေကိုလည်း ကန့်ကွက် ရှုတ်ချပေးပါ ။
သြဇီမှာ Telegraph သတင်းစာက မွတ်ဆလင်မ Barqa မျက်နှာဖုံးဝတ်ပြီး ၊
Sydney ရပ်ကွက် အသီးသီးမှာ လျှောက်သွားခိုင်းပြီး Survey လုပ် VDO ရိုက်တာ ။
အဖြူ တစ်ယောက်က အဲဒီ Barqa မျက်နှာဖုံးကို အမနာပ ပြောမိတာကို ၊
အနားက နောက်အဖြူမ တစ်ယောက်က အဲဒီအဖြူကောင်ကို ၊
မင်း ဘာလို့ သူများ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုကို Discriminate လုပ်ရတာလည်း ၊
မင်း ရိုင်းစိုင်းလှချီလား ဆိုပြီး Challenge ထလုပ်တာ ၊
ဟို အဖြူကောင် ထပြေးတာ တန်းနေတာပဲ ။ သတင်းစာထဲပါ ပါလာတယ် ။
ဆိုလိုတာက ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ်နှိုက်က Discriminate လုပ်တာကို လက်မခံတဲ့ အသိဝင်နေပြီ ။
အဲဒီလိုကို ဖြစ်နေရမယ် ။
ဆိုလိုတာက ၊ Barqa မျက်နှာဖုံး ဝတ်ရမယ် မဝတ်ရဘူး ကို မငြင်းလိုပါဘူး ။
Discrimination နှင့် ။ Discrimination အပေါ်ထားတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သဘောထားကို ပြချင်တာပါ ။
သူကြီးက ” လူမျိုးနဲ့.. နိုင်ငံသားကိစ္စ.. ဆက်ဆွေးနွေးချင်မိပါတယ် ” ဆိုရင် ၊
အဘ ကတော့ ၊ ခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပဲပြောထားရအုန်းမယ် ။
ဘင်္ဂလီပဲခေါ်ခေါ် ၊ ရိုဟင်ဂျာပဲခေါ်ခေါ် ၊
မြန်မာပြည်ထဲမှာ သူ့အဖေ အမေ ကော ၊ သူကော မွေးဖွား ကြီးပြင်းခဲ့ရင် ၊
သေချာပေါက် သူ့ကို မြန်မာ နိုင်ငံသားပေးရမှာပဲ ။
တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တယ်လို့ မပြောဖူးနော် ၊ ရောကုန်မှာစိုးလို့ ။
အေး ၊ မြန်မာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသွားရင်လည်း ၊
နိုင်ငံ အနှံ့ သွားလာနေထိုင်ခွင့် ၊
တန်းတူ ညီမျှစွာ ပညာသင်ကြားခွင့် ၊
တန်းတူ ညီမျှသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၊
လွတ်လပ်စွာ လင်ယူ မယားယူခွင့် ၊
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ၊ ပေးရမယ် ။
အဘ ကတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းကိုပဲ လက်ခံတယ် ။
လူသားတိုင်းသည် နိုင်ငံမဲ့ လူသားအဖြစ် မွေးဖွား မလာစေရ ။
The Universal Declaration of Human Rights ( UN )
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၊ သူ့ကို မွေးဖွားရာ နယ်မြေ၏ နိုင်ငံသား ခံခွင့် ရှိရမည်
၁၉၈၂ လူဝင်မှု ဥပဒေ ကို မတရားဘူး ၊ ခေတ် နှင့် မလျော်ညီဘူး လို့ထင်တယ် ။
အဘ အမျိုး အဆွေ အသိုင်း အဝိုင်း ထဲမှာ ၊
မွတ်ဆလင်ကော ၊ ကုလားကော ၊ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး ။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း ကိုးကွယ်တယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ တရားမျှတမှုကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး ။
ဒါ ဘဲ ။
ကျွန်မ မှာ လူမျိုးစုံ သူငယ်ချင်း ရှိတယ်။
ဒီလို အချင်းချင်း ချစ်ခင်နေတဲ့ လူတွေအကြား နေရာ အာဏာအတွက် သွေးခွဲခံခဲ့တဲ့ အတိတ်ဟောင်း သမိုင်းဟောင်း တွေ ကို သင်ခန်းစာယူလိုက်ကြပါစို့။
စိတ်နု သူ တွေကတော့ အမျိုးချစ်သူ တွေဖြစ်ပြီး သွေးနီ ပြရာကနေ မလိုတဲ့ လူမျိုးရေး အဓိကရုန်းတွေ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ (ဒီနေ့ ခေတ် ရခိုင် အရေးကို မပါ)
အဘဖောရေ – ရှင်လဲ ဘာသွေးစပ်စပ် ကျွန်မတို့ အားလုံး ရေ မြေတစ်ခု တည်းပေါ်မှာ ကြီးလာသူအားလုံး အတူတူပါဘဲ။
ဒီတော့ အသွေးအရောင် ခွဲမြင်ကြည့်မနေပါနဲ့ လို့ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အားလုံးလဲ အဘရဲ့ စေတနာနဲ့ လူတွေ ကို ဆင်းရဲခြင်းကင်းဖို့တွန်းတာ နားလည်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆင်းရဲတာက ပျင်းတာနဲ့ချည်း တွဲမနေချိန် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် တွေ ဝင်ရှုပ် ပြီး လွဲလွဲ လေးဖြစ်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။
ခရီးသွား Post တွေဘက် အာရုံပြန်ပြောင်း လိုက်ပါဦးလေ။
မဟုတ်ရင် ကျွန်မတို့ အားလုံး စပိန် ကနေ မထွက်နိုင်တော့ ဘဲ ဖြစ်တော့မယ်။
တော်ကြာ စပိန်မှာ အနေကြာလို့ ရွာ့အပျို တွေ စပိန်ကိုကို တွေ နဲ့ ငြိကုန် မှာစိုးရတယ်။
အရောင်းအ၀ယ်စီးပွားတစ်ခုခုကို လုပ်ဖူးခဲ့တဲ့သူဆိုရင် လူမျိုးရေး၊ အသားအရောင် ၊ ဘာသာယူဆမှု့ စတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံစရာမလိုဘဲ လူသားတိုင်းကို လူသားလို့ဘဲမြင်တတ်သွားကြမှာပါ။
ဥပမာ- ကိုယ်ကလဘက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုဖွင့်တယ်ဆိုပါတော့ မြန်မာလူမျိုးဘဲရောင်းမယ် အခြားလူမျိုးမရောင်း ဘူးနေမလား၊ မလုပ်ကြဘူးနော်၊ ဒီလိုဘဲ ဆရာဝန်ဆေးခန်းဖွင့်တယ် ကိုယ်က အသားဖြူတဲ့လူမျိုး အသိုင်းအ၀န်းကမို့ အသားမဲတဲ့သူတွေဆေးလာကုရင်မောင်းထုတ်မလား မလုပ်ကြပါ၊ အခုလက်ရှိ ခေတ်မှာ အလုပ်အတော်များများတွင် customer ဆိုတာရှိနေ ဆက်နွယ်နေ ကြပြီမို့ မည်သည့်ဘာသာ မည့်သည့်လူမျိုး ဖြစ်ပါစေ လူသားတိုင်း ကိုယ်နဲ့သဟဇာတ တည့်ရင် အသားအရောင်လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ ဆက်ခံခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အထောက်အကူ ပင် ဖြစ်မှာပါလို့တွေးမိပါတယ်ဗျာ။
အဘ ထင်တယ် ။
အဓိက က ၊ ဒီ အပြော နှစ်ခုကြောင့် ( ဗမာတွေ ) မခံစားနိုင်တာ ဖြစ်မှာပဲ ။
” မင်းတို့ ( တရုတ်တွေကို ) ဘယ်လောက် ဖိနိုပ်နိုင်မလဲ ။
လာစမ်းပါ ၊ ငါတို့ ရိုးသားပြီး ၊ ငါတို့ ကြိုးစားမယ် ။
လွန်ရော ကျွံရော Generation ၂ ဆက်အတွင်း ပြန်ချမ်းသာလာမှာ ၊
မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲလို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ပြီးသားပါ ”
အဲဒီ အချိန်က အဘတို့ တစ်မိသားစုလုံး ၊ သုည ဘဝ ကပြန်စရတဲ့ အချိန်မှာ ၊
မာန်သွင်းပြီး ကြုံးဝါး တဲ့ အသံလေ ။
တရုတ်ကပြောတော့ ( တရုတ်တွေ ) ဆိုတဲ့ စကားကတော့ ပါမှာပေါ့ ။
နို့ ၊ အဘ တစ်သက်လုံးလည်း တရုတ်တွေခမျာ ၊ ခွဲခြား ဖိနှိပ်ပြီး ခံခဲ့ရတာပဲ ။
အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ ဒီလို မာန်သွင်းတာ ၊ ဘာလွန် သတုန်း ။
” Prosperous ဖြစ်လို့ ၊ ချမ်းသာဖို့ လွယ်နေလို့ ၊ ဝင်လာတာပါ ။
တရုတ်ပြည်မှာ အရည်အချင်းတူ / စိတ်ဓါတ်တူ တရုတ် အချင်းချင်း ပြိုင်ရတာပါ ။
ချမ်းသာဖို့ လုံးဝ မလွယ်ပါဘူး ။
ဗမာပြည် မှာ ကျတော့ ၊ တရုတ် နှင့် ဗမာ ပြိုင်ရတာလေ ။
( ဟဲ ဟဲ ။ အဘ မပြောရက်ဘူး ။ လက်ရှိမှာ လက်ရည်ကွာနေတယ် လို့ပဲ လွယ်လွယ် မှတ်ပါ ) ”
ဒုတိယ အခါက Pooch က ၊ အဘ ကို Comment နှင့်ကို ဒဲ့ မေးယူတာလေ ၊
လက်ရှိ ပိုသာနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကနေ မြန်မာပြည်ထဲကို ၊
ဘာကြောင့် အခုထက်ထိ တရုတ်တွေ ဝင်နေ သေးသတုန်းတဲ့ ။
အဲသဟာကို အဘ က ဖြေရမယ့်တာဝန် ရှိလို့ ၊
အဘ အမှန်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေတယ်လေ ။
တတ်နိုင်သမျှ အချိုသာဆုံး စကားလုံးတောင် ရွေးသုံးပေးထားသေး ။
နောက်တစ်ခါ ဒီမေးခွန်း ထပ်မေးလာရင်လည်း ၊ အဘက ဒီ အဖြေအတိုင်းပဲ ပြန်ဖြေအုန်းမှာပဲ ။
နို့ ၊ အဘ က အဲဒါကို ၊ အမှန် လို့ ယူဆထားတာကိုး ။
ကျန်တဲ့အချက်တွေကတော့ ဘာမှထင်ထင်ရှားရှား မရှိလှပါဘူး ။
အဘ က တရုတ်ဆိုတော့ကာ ၊ ကြိုးစားရင် အောင်မြင်တဲ့ အကြောင်း ၊
ကိုယ်တွေ နှင့် နီးနီးစပ်စပ် ၊ ကိုယ်တွေ့ ဥပမာပေးစရာက ၊ တရုတ်တွေပဲ ရှိတော့ ၊
တရုတ်တွေကိုပဲ အဓိက ဥပမာ ပေးသွားတာပေါ့ ။
အဲဒါကို ၊ အဘက ” တောင်တော က သာ ” ” တောင်တော က သာ ” ဆိုပြီးပြောတိုင်း ။
သူတို့အခံနှင့် သူတို့ ” မြောက်တော က မွဲ ” ” မြောက်တော က မွဲ ” ဆိုပြီး ခံစားနေကြတာ ။
၁ ။ အဲလိုသာ အမှန်တရားကို အခုထက်ထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင် နိုင် / ချင် သေးရင် ၊
၂ ။ အခုထက်ထိ Emotional ဆန်ဆန် သိပ်ခံစားချင်နေသေးရင် ၊
ဘယ်တော့မှ ပုစ္ဆာက အဖြေမှန် ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူး ။
( ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၊ ပက်ပက်စက်စက်တောင် မ ပြောရဲတော့ဘူး ၊ အားမရလိုက်တာ )
တစ်ခုတော့ကောင်းပါတယ် ၊ နှိမ်ခံရတယ်လို့ ခံစားရရင်လည်း ၊
အခုအချိန်ကစပြီး မခံချင်စိတ်နှင့် ပက်ပက်စက်စက် ကြိုးစားပြလိုက်ပေါ့ ။
ရွာသူားတို့ အောင်မြင်ရင် ၊ အဘလည်း ပက်ပက်စက်စက် ကြီးကို ဝမ်းသာပါတယ် ။
စ လုပ်မယ်ဆို ” Comment ” ပေးသွားလိုက် ။
တကယ် သိသိသာသာ အောင်မြင်ရင်လည်း လာပြန်ပြောချည် ။
အဘ လည်း ဝမ်းသာရအောင် ။
ဟုတ်ကဲ့အဘ ကျမပြောချင်တာ တခုရှိပါတယ်။
အဘအခု သွားခဲ့တဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်တွေကို အဘအသက်ထက် ၁၀ နှစ်လျော့ပြီး ကျမသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ အဘက ၅၀ တန်းမှာ ရောက်ခဲ့ရင် ကျမက ၄၀ တန်းလောက်မှာ ရောက်နိုင်အောင်ပေါ့ ။ မိဘ ပိုက်ဆံနဲ့ မဟုတ်ပဲ ယောက်ျားပိုက်ဆံနဲ့ မဟုတ်ပဲ ကျမပိုက်ဆံနဲ့ပါ။
( ရောက်နိုင်တာမရောက်နိုင်တာကတော့ ကျမကြိုးစား အားထုတ်မှုပေါ့လေ )
လေယာဉ်ဘီးလုံးပဲ ဖက်ပြီး လိုက်ရ လိုက်ရပေါ့ ဟီး
ချမ်းသာခြင်း ဆင်းရဲခြင်းကတော့ မနက်ဖြန်ကိုတောင် ကျမမပိုင်တာမို့ ဘာကိုမှ မပြောရဲဘူး ။ ဒီနေ့ ငလျင်ကြီး လှုပ်ရင် ဒီနေ့ အုတ်ပုံဘ၀ကို ရောက်သွားနိုင်တာမို့ပါ။ သေချာပြောနိုင်တာတခုက ကျမကြိုးစားနေတယ် ဆက်လျှောက်နေတယ် ဆိုတာပဲ ။
ဟင် ၊ အခု အဘသွားတဲ့ ခရီးစဉ်များ ဘာမှ မကြီးကျယ်လှပါဘူးကွယ် ။
ဈေးဝယ်တာ သုံးတာ ဖြုန်းတာ မပါရင် တစ်ယောက် ဒေါ်လှ ၁၀၀၀၀ လောက်ပဲရှိတာပါ ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ သင်္ဘော ကပ္ပတိန် တစ်လ လစာ ပတ်ဝန်းကျင်ပဲ ရှိတာပါ ။
နောက်ပြီးတော့ ၊ အဘ က လူလတ်တန်းစားနော် ၊ သူဋ္ဌေး လုံးဝ ( လုံးဝ ) မဟုတ်ဘူး ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ သမီးတို့လောက်တောင် မချမ်းသာ ဘူးလို့ထင်တာပဲ ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ သမီးဦးတည်ချက်ထားရင် အဘ လောက်ကို မထားနှင့် ၊
ခပ်မြင့်မြင့် သူဋ္ဌေးကြီးတွေကို ပြိုင်ဖို့ ကြိုးစား ။
Anyhow ကြိုးစားတာကတော့ ကောင်းပါတယ် ။ အားပေးပါတယ် ။
ဘာပဲပြောပြော ၊ သမီးက Comment မှာတင်ရေးတယ် ဆိုတော့ ၊ တွန်းအား ဖြစ်တာပေါ့ ။
နောက်ပြီးတော့ ၊ ခရီးထွက်တာက အတွေးအမြင်ကျယ်စေတယ် ။ ကောင်းတယ် ။
ဒါနှင့် ၊ သမီးက အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီမို့တုန်း ။
၄၀ ပြည့်ဖို့ ၂ ရက်ပဲလိုပါတော့တယ် အဘဖောရေ
နောက်ရက်တော့ ရွာသွားလည်မလို့ ဟီး
အဘဖော ပိုစ့်အရေးနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို လက်ခံပါတယ်။
ပုံမှန်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူထက် ကိုယ်ကပိုကြိုးစားရင် ကိုယ်ခံစားရမှာပါ။
ခင်ခ ရန်ကုန်မှာနေရင်း အလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက နေ့ရုံးချိန်ဆို ကိုယ်ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီက အလုပ်ကိုလုပ်တယ်၊ သူ့ဆီက လခစားထားတာလေ၊ အဲဒီ သူ့အလုပ်ချိန်ပြီး သူ့အလုပ်တွေပြီးရင် ညပိုင်းကို အခြားသူတွေလာအပ်တဲ့ အလုပ်ကိုအေးဂျင့်ခ ယူပြီးလုပ်တယ်၊ ခင်ခ လုပ်တဲ့အလုပ်က ဆိပ်ကမ်းနဲ့ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး အလုပ်ပါ၊ နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဆိပ်ကမ်းမှာ အကောက်ခွန် စစ်ဆေးပြီးထုတ်ပေးရတဲ့ အေးဂျင့်အလုပ်ပေါ့ အဘဖောရေ။
အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် မဒမ်ခင်ခ နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတော့ နှစ်ဖက်မိဘဆီမှာမှီခိုမနေရဘဲ ရန်ကုန်မှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းလေးဝယ်ပြီး တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ ဘ၀လေးစခဲ့ရတယ်လေ။
ဒါကြောင့် အလုပ်ဆိုတာ ရှာကြံပြီး လုပ်တတ်သူအတွက် အကျိုးကတော့ မယုတ်ဘူးဗျ။
ပြီးတော့ ခင်ခက အေးဂျင့်လုပ်တာမို့ အလုပ်အပ်သူ မည်သည်ဘာသာ မည်သည့်လူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ်
ပေါင်းရတာကို အပေါ်မှာမန့်ထားခဲ့တာပါ ( ဗမာတွေ ) မခံစားနိုင်တာလို့ မဟုတ်ရပါ အဘဖောခင်ဗျ။
ပို့စ်ကရော ၊ ကော့မန့်တွေပါ အရမ်းဟော့ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ၊ ခဏလေးလော့အင်မလုပ်ပဲ ၀င်ဖတ်လိုက် ၊ ပြန်ပြေးထွက်သွားလိုက်နဲ့ အေးအေးလူလူကို ကော့မန့် မပေးလိုက်ရဘူး ၊အခုတော့ အပေါ်ကလူတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြီးသွားကြပြီ ။အလွန်သဘောကျပါတယ် ။ ……..
အော် .. ကွေးသောလက် မဆန့်မှီ ၊ ဆန့်သောလက်မကွေးမီ …… ။
ငါသည် မုချသေရမည် ၊ အချိန်ပိုင်းသာ လိုတော့သည် ၊ အသေမဦးခင် ၊ ဥာဏ်ဦးအောင် ကြိုးစား အားထုတ်ပါတော့မည် ဆိုတာလေးပဲ ရေရွတ်ရင်း ပြန်ထွက်သွားပါတယ် ။
အဘရေ..ဟစ်လာရီ ကပြောတယ်တဲ့ တရုပ်က စီးပွားရေးအုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တဲ့။ တရုပ်ကလည်း ပြောနေတယ် အမေရိကန်က
cold war mentalityတဲ့။ ဘာပြောတာလည်း သိဘူး။
အဲဒီတော့ အမေရိကန်တောင် စိုးရိမ်နေတာ သားတို့ဗမာငမွဲတွေတော့ ခေါင်းထဲထည့်မထားပါနဲ့ဗျာ။
တစ်ခုမရှင်းတာက အဘတို့မိသားစုကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်ခုနှစ်လောက်က ဘယ်လိုတွေ ဘယ်လောက်တောင် ဘယ်နေရာ ဘယ်ပုံစံနဲ့ ဖိနှိပ်ခဲ့ ကြတာလည်း သေသေချာချာရှင်းပြနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ လူတွေပဲဟာ ဟုတ်ရင်တော့ အဘဖက်ကနာပေးမှာပေါ့။ အခုတော့ ဖိနှိပ်တယ်ချဉ်းပဲပြောနေတယ်။ ဘာမှန်းလည်း မသိရဘူး။ ဇာတ်လမ်းလေးရှည်မယ် ဆိုရင်တော့ ပို့စ်အသစ် အနေနဲ့ပြန်တင်ရင် ဖတ်ရတဲ့ လူတွေအတွက်ကောင်းတာပေါ့။ အဘရဲ့ သုံညဘ၀ဆိုတာလည်း ဘာမှန်းမသိ။ တော်ကြာ “သူဋ္ဌေးသင်္ဘောမှောက်တာ သူတောင်းစားခွက်ပျောက်တာလောက်” မဆိုးပါဘူး ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေအုံးမယ်။
” တစ်ခုမရှင်းတာက အဘတို့မိသားစုကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်ခုနှစ်လောက်က
ဘယ်လိုတွေ ဘယ်လောက်တောင် ဘယ်နေရာ ဘယ်ပုံစံနဲ့ ဖိနှိပ်ခဲ့ ကြတာလည်း
ဟင် ၊ အဲလိုပြောမှတော့ ၊
အဘ မှတ်ပုံတင် Scan ဖတ်ပြီး ဂဇက်ပေါ်တင်သလို ဖြစ်နေပါ့မယ်ကွယ် ။
အဲလောက်ကြီးတော့ မဖေါ်ပါရစေနှင့်အုန်း ။
အောက်ကနှစ်ချက်ဖတ်ရုံနှင့် ဖိနှိပ်ခံရ မရ သိသာပါတယ်ကွယ် ။
တရုတ်စပ်လို့ဆိုပြီး သက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ် ပေးမတက်တဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ။
စပိန်မှာ နေရတာ ပျင်းလာပြီရှင့်။
အရီးလတ်ရဲ့ Comment က ၊
ဒီ Post ရဲ့ အခု ၁၀၀ မြောက် Comment ပဲ ။
OK, OK, မြို့တင်မကဘူး ၊ နိုင်ငံပါ ထပ် ပြောင်းပေးမယ် ။
ကျွန်တော်တို့အိမ်ဘေးက တရုပ်တွေတော့ ကန်တော့နေတာပါပဲ ဘာတွေကန်တော့လည်းတော့မသိဘူး။ နှစ်ကူးလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးနဲ့အိမ်ထောင်ကြတဲ့ တရုပ်တွေလည်း ကတော့တာ တွေ့ဘူးတယ်။ အိမ်တွေ ပိုက်ဆံတွေမီးရှို့တာက ဘာပွဲလဲ ပြောပါအုံး။ တရုပ်တန်းမှာတောင် တွေ့ဘူးခဲ့ပါတယ်။ အဲအဘရေ ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ လမ်းမပေါ် အကျင်းပမခံ တာတော့ရှိချင်ရှိမယ်။ အဘအိမ်မှာ အဘကန်တော့တာတော့ အဘရေခွင့်မပြုဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အများကိုမထိခိုက်စေပဲ လုပ်ခြင်တာလုပ်ခွင့် မရတာတော့ စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ ပြောချင်တာက အဲဒါတွေ အတွက်နဲ့တော့ ဗမာတွေ ဖိနှိပ်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး ဒါက အဲဒီခေတ်ကစနစ် အစိုးရသက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။အဘပြောဆိုတာတွေက တဖက်သတ်ကျနေလို့ပြောတာပါ၊ ကွန်မန့်တွေထဲမှာဆိုရင် “လက်ရည် မတူဘူးလေ”တွေ ဘာတွေတောင်ဖြစ်လာတယ်။ အဘသေသေချာချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး အဘပြောထား/မန့်ထားတာတွေ သြစတြေးလျစံနဲ့ကိုက်မကိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ။
အပေါ်ကနှစ်ချက်က ဗမာတွေ ဖိနှိပ်တယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒါကအဲဒီခေတ်အချိန်အခါနဲ့နိုင်ငံရေးကြောင့်ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင် Falun Gong ဆိုတဲ့ ဘာသာရေး အဖွဲ့ကိုနှိပ်စက်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေဆဲပါပဲ။ မိုးပြာကိစ္စ မတရားဘူးပြောနေကြသူများပါ စိတ်ဝင်စားရင် ရှာကြည့်ပါ။
အဘနေတဲ့ သြစတြေးလျမှာတောင် အဲဒီအဖွဲ့ကြီးရှိသေးတယ်။ နှိပ်စက်တာကမှ တကယ်ကြောက်စရာနော် စစ်အတွင်းမှာ သုံ့ပန်းတွေကိုနှိပ်စက် သလိုနှိပ်စက်တာ။ တရုတ်နဲ့ ဗမာ ဘယ်သူကခေတ်ရှေ့ကိုရောက်နေသလဲ? ကျွန်တော် တချိန်ကြရင်မြန်မာပြည်မှာကြုံဘူးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေရေးတင်ပါအုံးမယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ မအားလပ်သေးတာနဲ့၊ စရေးဖို့ကို မရေးဘူးတော့ ဘဲဥအစရှာမရသလို ဘယ်ကစရေးရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ။
နောက်ဆုံးတိုတိုပြောချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်ကိုချစ်ရင် မြန်မာတပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ခံစားကြည့်ပြီးပြောစေချင်တယ်။ ဘယ်ကိစ္စမဆိုပေါ့။
၀ယ်ယူထားည့်မြေများ ပြည်သူပိုင်အဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်း ။ ကျမအဖေကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်မှာ ယခင်ခေတ် ဘီအိုစီ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပေးအပ်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်သာ တစ်ဦးတည်းသော ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် မည်သူမဆိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖြေဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကြော်ငှာခဲ့ရာတွင် လူသန်းပေါင်း သုံးဆယ်ရှိည့်အနက် ဖြေဆိုရာတွင် ပြိုင်ဘက်မရှိ အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပါသော်လည်း ဖြေဆိုပြီးသည့်အခါတွင် နိုင်ငံသားစစ်စစ် မဟုတ်ခဲ့ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်မှရုပ်သိမ်းခံရကာ မိမိကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးအတွက် လက်လွတ် နစ်နာဆုံးရှုံးခံမှုအား
ပေးဆပ်ခဲ့ရသည့်အပြင် မိမိပိုင်ဆိုင်ကြိုးစားရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီအား ပြည်သူပိုင် အသိမ်းခံရပြီးသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုန်သွယ်ရေး(စာရေး) အဖြစ်ပြန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့် အနည်းငယ်သာ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း အပေါ် နစ်နာဆုံးရှုံးသည်ဟု ကျမ၏အဖေက ယူဆထားခဲ့တာ ပြောပြလိုပါတယ်။။
မ Aye ခင်ဗျား. အမခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပါတယ်။ အမအရှေ့မှာမန့်ခဲ့တဲ့ အမအဖေ ရှေးတရုပ်ကြီး အကြောင်းဖတ်ရတာလည်း လေးစားအားကျမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ ငါတရုတ်ကျမှရွေးဖြစ်ရတယ်လို့ မတွေးစေချင်ပါ။ လောကတစ်ခွင်လုံးကိုသိမ်းကျုံးကြည့်စေချင်တယ်။ ကျွန်တော်က အမကိုပြောနေခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ အမရေးထားတဲ့ ပုံစံအရဆိုရင် ကိုယ့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို ခံစားချက်လေးနဲ့ရေးဖွဲ့ရုံသက်သက်ပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ပြိုင်မနေဘူး၊ နှိမ်ပြောမနေဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ ဖတ်ရသူလည်း ဆင်ခြင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘာဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှု မှလည်း မပါဘူး။အမအဖေကိုယ်တိုင်က ဘာဝနာပွားများဖို့လုပ်နေတယ် ဆိုကတည်းက သူဟာလောကအကြောင်း နားလည် မှုရှိလို့လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဘရဲ့ ဗမာတွေကတော့ ဘာညာတရုတ်တွေမတော့ဘာညာ ဆိုပြီး ပြောနေတာကိုပြောတာပါ။ ဒါတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေရင် သိသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းတရုတ်တွေထဲမှာလည်း အမှတ်မှီရဲ့သားနဲ့ နိုင်ငံသားမဟုတ်လို့ ဆေးကျောင်း/စက်မှုတက္ကသိုလ်/ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ် မတက်ရတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ မြန်မာကတရုပ်ကိုနှိမ်ရင်တော့ မြန်မာနှိမ်တယ်တဲ့။ မြန်မာကမြန်မာကို နှိမ်ရင်တော့ နင့်လူမျိုးကနှိမ်တာခံပေါ့လား? တရုပ်က မြန်မာမလေး ကို မဟုတ်တယုတ်လုပ်ရင် မြန်မာတွေလည်း လုပ်တာပဲတဲ့ မြန်မာကသာ တရုပ်မလေးကိုလုပ်ခဲ့ရင် မြန်မာတွေ rapists တွေလို့ပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြားမှာနှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာရောက်နေပြီးသား လူတွေ အတွက်တော့ အတွေးတွေမှားနေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အဓိက ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ သလိုပဲ လူမျိုးရေးတွေနဲ့ မပြောသင့်တာကို ပြောတာပါ။ သူကြီးမန့်ထားတာလေး ဖတ်ကြည့်ပါအုံးနော် နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုထပ်ပြောချင်ပါတယ် သြစတြေးလျမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ နိုင်ငံသား သာခန့်ပါတယ်။ ပြည်နယ်အဆင့်မှာလည်း နိုင်ငံသားမဟုတ်ရင် လွယ်လွယ်နဲ့မရပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားဆိုရင်တော့ အရမ်းကိုဦးစားပေးတယ် လို့နားလည်ထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်သုံးဆယ်လောက်က ဗမာပြည်က အဖြစ်အပျက်တွေလို မဟုတ်ပေမဲ့။ သူ့ စည်းမျဉ်းလေးနဲ့သူတော့ရှိပါတယ်။တိုးတက်တဲ့ သြစတြေးလျမှာ တရုပ်တွေကို သာမာန်လူတွေထဲကနှိပ်ကွပ်တာလည်းရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၇နှစ်အတွင်းက သတင်းတွေ ရှာဖတ်ကြည့်ပါဗျာ။
ဘဖောရေ – ဂွတိုက်တယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့။ တစ်ခါတလေ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ ပိုကောင်းသလိုပါပဲ။ အဆက်အစပ်ရှိအောင် မိသားတစ်စု အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အစိတ်လောက်က အဲဒီမိသားစုက ငွေနည်းနည်းကလေးနဲ့ ရန်ကုန်မှာ ခြံမြေတစ်ကွက် ၀ယ်ခဲ့တယ်။ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်လေးထဲမှာပေါ့။ ဘေးခြံတွေက ခြံရောင်းပြီး စီးပွားရှာကြတယ်။ ကားထောင်တာတို့၊ ကုမ်ပဏီထောင်တာတို့ အကြီးအကျယ်လုပ်ကြတယ်။ အနှစ် ၂၀ကျော်စီးပွားရှာအပြီးမှာ ခြံရောင်းပြီး စီးပွားတွေ အတင်းရှာခဲ့တဲ့ (တရုတ်တွေပါ ပါတယ်) လူတွေဟာ ခြံမရောင်းဘဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်ခဲ့တဲ့ မိသားစုကို ဘယ်လိုမှ လိုက်မမီတော့ပါဘူး။ သူတို့ခြံဟာ ဟောလီးဝုဒ်အိမ်ဈေးနဲ့ နင်လားငါလား အပြိုင်ပါပဲ။ အဲဒါကို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
ဒါက မြင်မိတာလေးပြောတာပါ။ သဘောတရားအပိုင်းကိုတော့ ဘဖောကို ထောက်ခံပါတယ်။ ခုတလော စိတ်လေ နေတာ။ ဘဖောစာကို ဖတ်ပြီး အားတွေတိုးတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေပြီးရင် အလုပ်ကို မီးကုန်ယမ်းကုန် လုပ်ဦးမယ်။
မ ၀င့်ပြုံးမြင့် ရေ ။
ဟိုဘက် Post မှာ အဘပေးခဲ့တဲ့ Comment လေးပဲ ပြန်ပြောပါရစေ ခင်မျာ ။
” အဘ သဘောကတော့ ။
အားသွန် ခွန်စိုက် ဖိလုပ်ပြီး ၊ ဘဝ ကို တိုးတက်စေချင်တာပါ ။ ”
” ဘဖောစာကို ဖတ်ပြီး အားတွေတိုးတယ်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေပြီးရင် အလုပ်ကို မီးကုန်ယမ်းကုန် လုပ်ဦးမယ်။ ”
ဘဖောစာကို ဖတ်ပြီး အားတွေတိုးတယ် ဆိုတဲ့အတွက်တော့ ၊
အထူး ဝမ်းသာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ မ ၀င့်ပြုံးမြင့် ရေ ။
” အဘ တစ်ကယ်များ အဲလို အတူတကွ နေထိုင်ရေးကို ယုံလား ”
ကိုရင် မိုးတိမ် ။
အဘ ကကော ၊ အဲဒီ ကုလားကြီးတွေနှင့် တွဲပြီး ၊
ဝမ်းသာအားရ တစ်ကုတင်ထဲ အတူအိပ်ချင်နေမယ်များ ထင်နေလို့လား ။
ရေရှည် ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း ဖြစ်အောင် ပြောနေတာ ။
ကိုရင် ဒါဆို ဒီ အရေးအခင်းအတွက် ၊
ဖြစ်နိုင်မယ့် အဖြေ ကို တိုတို ရှင်းရှင်းပြောပြလေ ။
ကိုရင် ဘယ်လို ဖြစ်ချင်လည်း ဆိုတာ ။
ဖြစ်နိုင်မယ့် အဖြေ ၊ တရားမျှတမယ့် အဖြေ နော် ၊
မ ဖြစ်နိုင်မယ့် အဖြေ ၊ တရား မ မျှတမယ့် အဖြေ တော့ မပြောနှင့် ။
မ လောနှင့် ၊ အေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစား ။
အဘ ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ လိုက်မပြောချင်ဘူး ။
အခု လောလောဆယ် မနေ့ညက သမ္မတကြီး ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းပဲ ပြန်ကြည့်အုံး ။
အဘ အာဘော် တစ်ခုမှ မပါဘူး ။ သမ္မတကြီး အာဘော် တွေချည်းပဲ ။ ဖတ်ကြည့် ။
” ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည်
ဗြိတိသျှတို့ အုပ်စိုးစဉ်ကပင် ရှိခဲ့ပြီး ၁၈၇၂ ခုနှစ်၊ ဗြိတိသျှတို့ ကောက်ယူခဲ့သည့်
သန်းခေါင်စာရင်းအရ မဟာမေဒင် (၅၈,၂၅၅) ဦးရှိခဲ့ပါတယ် ”
” ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂဝင် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသည်
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအားလုံးနှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရသည့် အားလျော်စွာ
လူသားများနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စ အရပ်ရပ်တွင် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ
ဖြေရှင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် တာဝန် ရှိနေပါတယ်။
နိုင်ငံအများအပြားက လက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရှိသော လူ့အခွင့်အရေး စံချိန် စံညွှန်းများ၊
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ပါက
ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မျက်နှာပျက်ဖွယ်ရာ အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများအနေဖြင့် ကိုယ့်ပြည်နယ်၊ ကိုယ့်လူမျိုးစု၏
အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုရမည် ဖြစ်သော်လည်း မိမိအကျိုးစီးပွား တစ်ခုတည်းကိုသာကွက်၍
ရှုမြင်ခြင်းမပြုဘဲ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အမြင်တရားဖြင့် ရှုမြင်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တစ်မျိုးသားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ကမ္ဘာ့မိသားစုဝင် နိုင်ငံများအပါအဝင်
လူသားအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားကိုပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုမြင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ “
နောက်တစ်ခုက ၊ ကိုရင် မိုးတိမ် ၊ ဘယ် အဖွဲ့အစည်းကလည်းတော့ မသိဘူး ။
အဘ သိသလောက်တော့ စစ်တပ်ကလည်း အခုကိစ္စမှာ သမ္မတကြီး နှင့် တစ်သဘောထဲပဲ ။
” အမှန်တရား ဘက်တွင် တပ်မတော် ရှိပါသည် ။ ”
” ဤ အပိုင်းတွင် မည်သူ သာစေ၊ မည်သူ နာစေ ဆိုသည်များ မပါဝင်ပါ။
ဖြူဖြူ မည်းမည်း မှန်သည့် ဘက်မှာပဲ တပ်မတော် ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုး ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက်ဟု ဆိုသည့် လူတစ်စုက ရန်ကုန်မြို့ ကြီးတွင် နေ၍
တပ်မတော်အား ပုတ်ခတ် ပြောဆို နေခြင်းသည် လက်ခံ နိုင်ဖွယ် ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။
မျက်မမြင် ပုဏ္ဏားများ ကဲ့သို့ အခြေ အနေ မှန်ကို မြင်နိုင်စွမ်း မရှိသည့် အတွက်
စိတ်ထင် ရာ ဝေဖန် ပြောဆို နေခြင်း ဟုသာ စာရေးသူ ယူဆ မိပါသည်။ ”
အဘ လေးသိန်း လှူတာကလည်း ၊
ရခိုင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဘက်ကနေချည်း ၊
မှားမှားမှန်မှန် လိုက်တဲ့သဘော မဟုတ်ဘူး ။
ရန်ပွဲမှာ ဒါဏ်ရာရလာတဲ့ ကိုယ့် အိမ်သားကို ၊
မှားတာ မှန်တာ နောက်ထား ဆေးအရင် ကုပေးတာ ။
ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ် ကိုရင် ။
အဲဒီ ဘင်္ဂါလီက ၂ ယောက် ၃ ယောက် လောက်ဆိုရင် ၊
ရတယ် ၊ အဘ ကိုယ်တိုင် သွားသတ်ပြီး ၊ အဘ စက်တိုင် တက်သွားလို့ရတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ကိုရင် ထည့်စဉ်းစားဖို့က ဟိုဖက်ကမ်းကော ဒီဖက်ပါဆိုရင် ၊
စုစုပေါင်း ၊ လူ တစ်သန်းလောက်ရှိတယ် ။
အဲဒါကို ကိုရင်က ဘယ်လိုများ လုပ်ချင်သတုန်း ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လဲမသုံးပါဘူး။အခုဖြစ်နေတာက ရိုဟင်ဂျာကိုတိုင်းရင်းသားအဖြစ်ကိုလက်မခံလို့ မဆီမဆိုင်ဘာသာတူ မြန်မာနိုင်ငံသားထဲကကောင်တွေဝင်ပါနေလို့ဖြစ်နေတာပါ။ကျုပ်ကတော့ ဒဲ့ပဲပြောရရင်ဘင်္ဂါလီကို နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ကိုမခံနိုင်ဘူးဗျာ။အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ကတော့ မဖြစ်နှိုင်ဘူး။အဲကောင်တွေသောက်ကျင့်ကိုသိလို့ကို မဖြစ်နှိုင်တာ။တရုပ်တောင် အဲလောက်သောက်ညင်မကပ်ဘူး။သုိ့သော် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု့တွေကိုလဲမကြိုက်ဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေကို ဗမာတွေက ဖိနှိပ်တာတော့ ကျုပ်ပါတ်ဝင်းကျင်မှာ မရှိဘူးခင်ဗျ။တိုင်းရင်းသားတွေကြားထဲမှာ ကျွန်တော်အခုနေပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အတူနေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျ။ဘင်္ဂါလိမ်တွေနဲ့တော့မဖြစ်
နှိုင်ဘူးခင်ဗျ။အခုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ အဘရေ……
ကိုရင် မိုးတိမ် ရေ ။
ကိုရင်က မုန်းတဲ့ အကြောင်းကြီးပဲ ပြောသွားတာကိုး ။
အဘ က ဒီ အရေးအခင်း အတွက် အဖြေ ကို မေးတာ / ရှာစေချင်တာလေ ။
အခု Obama ပြောသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းလေး မဆိုးပါဘူးကွယ် ။
အဘတော့ Obama ပြောသလိုသွားမှပဲ ၊
တိုင်းပြည် ရေရှည် တိုးတက် ချမ်းသာမယ် ထင်မိတယ် ။
ဒီကမ္ဘာမှာ သြဇာအကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့အရှေ့မှာ ကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်။ ‘
ကျွန်တော့ အသားအရောင်ဟာ တစ်ခါတုန်းကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မဲပေးခွင့်ကို ငြင်းဆိုနေခဲ့တယ် ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ သူ့ရဲ့ကွဲပြားမှုတွေကို ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သလို ၊
( သူ့ရဲ့ကွဲပြားမှုတွေကို ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သလို )
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကို ခင်ဗျားတို့လည်း ကျော်လွန်နိုင်မယ် ။
ဒီနယ်နိမိတ်ပိုင်နက်အတွင်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူသားတိုင်းဟာ ၊
ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံ အကြောင်းရဲ့ တစိတ်တပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေကို ခင်ဗျားတို့က အသိအမှတ် ပြုမယ်ဆိုရင် ၊
ဒါဟာ အားနည်းချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာခွန်အားပါ။
၁ ။ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသား ( တိုင်းရင်းသား ) ပေးဖို့ လက် မခံပါဘူး ။
၂ ။ ခိုးဝင်တာ သေချာတဲ့ကောင်တွေကိုလည်း နိုင်ငံသား မပေးစေလိုပါဘူး ။
သို့ပေမယ့် ၊ ( ဗြိတိသျှ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ) ၁၈၇၂ ခုနှစ် ကတည်းက ရှိနေခဲ့တဲ့ ၊
နှစ်စ်ပေါင်း ၁၄၀ ကျော် ၊ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့ ၊
နိုင်ငံသား ပေးရတော့မပေါ့ ။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ကျေးဇူးပြုပြီး ၊ မွတ်ဆလင် ဆရာများ သည်းခံပေးပါ ။
ဝင်မပြောစေလိုပါ ။ နို့မို့ရင် ၊ ဟိုဖက်ဆဲ ၊ ဒီဖက်ဆဲ နှင့် ၊
အဘ Post ပါ နေရင်း ထိုင်ရင်း Comment အပိတ်ခံရမှာ စိုးလို့ပါ ။
” သြစတြေးလျမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်း ကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ နိုင်ငံသား သာခန့်ပါတယ် ”
ကို garuda ရေ ။
ဟုတ်ပါတယ် ၊ သြဇီမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ထမ်း ကို နိုင်ငံသား ဖြစ်မှခန့်တာ ။
ဒါပေမယ့် ၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးပြီ ဆိုတာနှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေးရသွားပြီး ၊
တရုတ်စပ်စပ် ၊ မွတ်ဆလင် ဖြစ်ဖြစ် ၊ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ခွဲခြား ဖိနှိပ်ခွင့် မရတော့ပါဘူး ။
တရားဥပဒေ နှင့်ကို အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပေးထားတာပါ ။
” မြန်မာပြည်မှာ ၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်းထဲက ၊
ဘယ်သူ တစ္ဆေကြီး ကန်တော့ရဲလဲ ၊ ဘယ်သူ မိုးပေါ်ဘုရား ကန်တော့ရဲလဲ ။ ”
အဘ ရေးတာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအုန်း ။ အစိုးရ ဝန်ထမ်း လို့ပါပါတယ် ။
အစိုးရဝန်ထမ်း ဆိုကတည်းက နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားတွေပေါ့နော် ။
အဲဒီ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသား အစိုးရဝန်ထမ်းတွေထဲမှာမှ ၊
တရုတ်စပ် ၊ ကုလားစပ် တွေကို နှိပ်ကွပ်တာ ။
မဟာ ယာန ကိုးကွယ်သူတွေ ၊ မွတ်ဆလင် ကိုးကွယ်သူတွေကို နှိပ်ကွပ်တာကို ပြောတာပါ ။
စစ်တပ်ထဲမှာ အရမ်းလူသိများတဲ့ ပြောစကားဖြစ်တဲ့ ၊
အေပိုး ၊ ဘီပိုး ၊ စီပိုး နှင့် ပြုတ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားထဲက ၊
စီပိုး ဆိုတာ C = Christian ခရစ်ယာန် ဖြစ်ခြင်း ကိုပြောတာပါ ။
မွတ်ဆလင် ဆိုရင်တော့ ပြောမနေနှင့်တော့ ။
အဲဒီလို ခွဲခြား ဖိနှိပ်ခြင်း ဒါဏ်ကို အဘ တစ်သက် တောက်လျှောက်ခံ ခဲ့ရတာပါ ။
အဘရေ ကျွန်တော်ပြောချင်တာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှ အလုပ်ခန့်ခြင်းမခန့်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်….အခုချိန်မှာတောင်
သူ့စည်းသူ့မျဉ်းလေးတော့သြစတြေးလျမှာလည်းရှိကြောင်း…ပြောချင်တာ။ သြစတြေးလျက နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ လူတွေကို အခွင့်အရေး အကုန်ပေးတယ်ဆိုတာ…သူ့နိုင်ငံအပေါ် မကောင်းရင် သူကချက်ချင်း trace လိုက်လို့ ရတယ်။ အမြဲတမ်းလည်း ကြည့်နေတာ။လိုအပ်ရင် မျိုးဆက်တဆက်မကဘူး အမြဲတမ်းလိုက်ကြည့်နေတာ။ မူဆလင်ဆို လာတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ပိုကြည့်အုံးမယ်။ Technology, Security က အရမ်းကောင်းတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကလူသိအောင် လိုက်မကြည့်ဘူးလေ။ အလုပ်ခန့်ရင်လည်း security check က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူဘူးလေ။ ဒါတွေအဘသေသေ
ချာချာလေ့လာကြည့်ရင်သိလာပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်မှာက အဲသလိုလုံခြုံရေးကောင်းဖို့ အခုအချိန်မှာတောင် အများကြီးသွားရအုံးမယ်။ ပြီးတော့ အဘ အနှိမ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက
တကမ္ဘာလုံးမှာ အဲဒီလိုကိစ္စတွေနေရာ အနှံ့ရှိခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်တာ မြန်မာတွေကပဲ ဖိနှိပ်နေတာမဟုတ်ပါ။ ခေတ်အဆက်ဆက်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပါ။ အခုအချိန် အဲဒီဖိနှိပ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ ဗမာပြည်ကအစိုးရနဲ့
ပေါင်းပြီးစားနေတဲ့ အထဲမှာ တရုပ်တွေမပါဘူးလား။ အခုခေတ်မှာလည်းကြည့်လေ ဟိုတနေ့က သမ္မတကြီးလေဆိပ်
ကပြန်လာတော့ သွားကြိုတဲ့အထဲမှာ သမ္မတကြီး အနောက်ကပါလာတာ တရုတ်လူမျိုးသူဋ္ဌေးကြီးတွေလေ။ မြစ်ဆုံကြီးကိုလုပ်တဲ့အထဲမှာရော ဦးလော်စစ်ဟန်အမျိုးတွေက တရုတ်တွေမဟုတ်ဘူးလား။ မကျေနပ်လို့ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးနော် အဘမြင်တတ်အောင်လို့ မြန်မာပြည်မှာ အခုလတ်တလောရှိနေတဲ့ မီလျံနာ(ဒေါ်လာ)တရုတ်သူဋ္ဌေးတွေကို တန်းစီပြလိုက်ရင် တရုတ်တွေမနဲဘူးဆိုတာသိရင် အဘအံ့သြသွားမယ်။ ဒါတောင်ခရိုနီ အဆင့်မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော် သိကြားဖူးတဲ့ တရုပ်စစ်စစ်တွေထဲမှလည်း ညွှန်ချုပ်အထိရောက်သွားတာတွေ ရှိပါတယ်။ သခင်ရှုမောင်တောင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီး ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲလေ။ အဘက တရုတ်အားလုံး လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်စေချင်လို့လား။ အဘရေ ပေါင်းတတ်ရင် လုပ်တတ်ရင် ဗမာပြည်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန်နေလို့၊ အများမိုးခါးရေသောက်တိုင်းမသောက်လို့၊ တော်ရဲ့သားနဲ့ ဂျောင်ထိုးခံထားရတဲ့ မြန်မာတွေ အများကြီးပါ။အဲဒီလူတွေက အဘအဖေ
မာဇဒါဂျစ်ကြီးစီးနေနိုင်တာတွေ့ရင် အဘလိုအတွေးမျိုးတွေပဲ တွေးရမလား။ အဘကိုပြောတာ ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့မမြင်စေချင်လို့။ အဘဖိနှိပ်ခံခဲ့ ရတယ်ဆိုပြီး အဘပြောခဲ့တာတွေဟာ အောက်ဆုံးအထိ ဖိနှိပ်ခံရတာလဲမဟုတ်။ အဘထက်ဆိုးတဲ့ တရုတ်တွေ၊ မြန်မာတွေရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်မှာလည်း ပြောခဲ့ပြီးပြိ အဲဒီခေတ်အချိန်အခါတွေက နိုင်ငံရေးကိစ္စ ကွန်မြူနှစ်ကိစ္စအများကြီးရှုပ်ထွေးနေတယ်။ တရုတ်တရုတ်ချင်းကလည်း မတဲ့ခဲ့ကြတာလည်း ရှိတယ်လေ။ တစ်ချိန်က ထိုင်ဝမ်တောင် ဘလက်လစ်(စ)
ထဲပါခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီလိုပဲ တစ်ခြားဘာသာရေး လူမျိုးရေးတွေရှုပ်ထွေးခဲ့ပါတယ်။ အဘတို့ကို ဦးနေ၀င်းကြီးက သူ့ဘရားသား ပြည်မတရုတ်တွေနဲ့ မတဲ့တဲ့ တရုတ်တွေလို့မသင်္ကာလို့ နှိပ်ကွပ်တာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ နောက်တစ်ခု ဘယ်အစိုးရလက်ထက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ တရုတ်ရှေ့နေ၊ တရုတ်စီးပွားရေးသမား
များဟာ(မြန်မာနိုင်ငံသားပြောတာပါ)အမြဲတမ်းပါနေပါတယ်။အရှေ့မှာသာထွက် မကကြတာပါ။ အဲဒီလိုတွေဖြစ်ခဲ့တာကို မြန်မာကနှိမ်လို့ မင်းတို့ဘယ်လောက်နှိမ်နိုင်မလဲ ဆိုတော့ အဘ ဘ၀အတွက်
တော့ တွန်းအားအနေနဲ့ ရရှိခဲ့လို့ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်သွားပေမဲ့၊ အခုအချိန်မှာ အဘမပြောသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ဖတ်နေတဲ့အထဲမှာ အဘတို့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေလည်းတယောက်မှ မပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ you tube မှာ အမေရိကန်ရောက် မူဆလင် ပညာတတ်ကုလားကြီးတစ်ယောက်ပြောဖူးတယ်၊ သူနေခဲ့တဲ့ ခေတ်မှာ မြန်မာပြည်မှာ လာအခြေခြနေထိုင်သူတွေကို နှိမ်တယ်
ပစ္စည်းတွေသိမ်းတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ အမေရိကားသွားတယ။် မထူးပါဘူးတဲ့ အလုပ်ထဲမှာ တော်တော်ကြာကြာ အနှိမ်ခံခဲ့ရတာပါပဲတဲ့။ ကိုကပိုတော်တယ် ပိုသိတယ်ဆိုပေမဲ့တဲ့ သူတို့လူမျိုးအချင်းချင်းပဲ ရာထူးတိုးပေကြတယ်တဲ့။အဲဒီတုန်းက အဘကမြန်မာပြည်မှာ ဆိုတော့ ဘယ်သိမလဲ။ ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ လင့်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈လ လောက်က လူတစ်ယောက်တင်ထားတာပါ။
“စီပိုး ဆိုတာ C = Christian ခရစ်ယာန် ဖြစ်ခြင်း ကိုပြောတာပါ ။
အဲဒီလို ခွဲခြား ဖိနှိပ်ခြင်း ဒါဏ်ကို အဘ တစ်သက် တောက်လျှောက်ခံ ခဲ့ရတာပါ ။”
အဘရေ အဘပဲပြောသွားတယ်လေ သမီးလေး pooch ကို “ တရုတ်ပြည်မှာ အရည်အချင်းတူ / စိတ်ဓါတ်တူ တရုတ် အချင်းချင်း ပြိုင်ရတာပါ ။ချမ်းသာဖို့ လုံးဝ မလွယ်ပါဘူး ။ ဗမာပြည် မှာ ကျတော့ ၊ တရုတ် နှင့် ဗမာ ပြိုင်ရတာလေ ။
( ဟဲ ဟဲ ။ အဘ မပြောရက်ဘူး ။ လက်ရှိမှာ လက်ရည်ကွာနေတယ် လို့ပဲ လွယ်လွယ် မှတ်ပါ )”
အဘ အဲသလိုပြောတာ ကောင်းသလား အဘပြောတဲ့ စကားတွေကိုက သြစတြေးလျ standard နဲ့ကြည့်ရင် “လူမျိုးခွဲခြား” discriminate လုပ်နေတာနော်။ အခုလောလောဆယ် ဘယ်သူတွေကရော အဘနဲ့ပြိုင်နေလို့လည်း။
အခုအဘပြောခဲ့တဲ့ pooch က ၁၈နှစ် မကျော်သေးရင်တော့ အင်း..။
တစ်ချို့ အဘ သူငယ်ချင်းတွေဆို RIT / MC တက်နေရင်း တန်းလန်း နှင့် ၊
ကျောင်းပြီး ဘွဲ့ရခါနီး 4th Year / 5th Year တွေနော် ၊
မော်ကွန်းထိန်းရုံး ခေါ်ပြီး မင်းတို့ မနက်ဖြန် ကျောင်းတက်စရာ မလိုတော့ဘူး ။
မင်းတို့ကို ကျောင်းထုတ်လိုက်ပြီ ဆိုပြီး အပြော ခံရတာပါ ။
( စ ကတည်းက ပေးမတက်တာဆို ခံသာပါသေးတယ် )
( အခုကတော့ ၊ လူစိတ် မရှိတာလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပဲ )
တစ်ချို့ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူ တွေဆို ရူးကြောင်ကြောင်တွေဖြစ်လို့ ။
နောက်နေ့ ၊ နောက်လ တွေအထိ ကျောင်းခန်းထဲ သွားသွားထိုင်နေလို့ ၊
နောက်ဆုံး ကျောင်းစောင့်ခေါ်ပြီး ဆွဲထုတ်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေပါ ။
အဘ ရဲ့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း အဲလိုဖြစ်ခဲ့ပြီး ။
သူ့ ခမျာ RIT ကို စွဲလန်းလွန်းလို့ အလွမ်းပြေ ၊
RIT မှာ အဲဒီတုန်းက ညနေပိုင်းဖွင့်တဲ့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းပြင် သင်တန်း ၊
မီးပူ ၊ မီးဖို ၊ ပန်ကာ ပြင်တဲ့ သင်တန်းကို အလွမ်းပြေသွားတက်ခဲ့တာပါ ။
အဘ ကိုယ်တိုင် သူစိတ်ပြေပါစေတော့ ဆိုပြီး သူနှင့်အတူ လိုက်တက်ပေးခဲ့ရတာပါ ။
သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို အဲဒီ အချိန်အခါမှာ သူတို့ ဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့သူတွေပဲ နားလည်မှာပါ ။
နောက်ပြီးတော့ ကိုရင်ပြောတဲ့ ၊
” သြဇီမှာ တိုင်းရင်းသားဆိုရင်တော့ အရမ်းကိုဦးစားပေးတယ် ” ဆိုတာကို ၊
မြန်မာပြည်ကလူတွေ တစ်မျိုး နားလည်နေမှာစိုးလို့ ရှင်းပြပါရစေ ။
လူများစု လူဖြူတွေ ကြားထဲမှာ နေရရှာတဲ့ ၊
လူနည်းစု အဘော်ရီးဂျင်းတွေဟာ ပညာတတ်သူ ရှားလွန်းတဲ့အတွက် ၊
လူများစု လူဖြူတွေက ၊ လူနည်းစု အဘော်တွေကို အထူး အခွင့်အရေးပေးနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ ။
အခု မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စက ၊ လူများစု ဗမာတွေကသာ ချုပ်ကိုင်ထားပြီး ၊
လူနည်းစု ကရင် ၊ ကချင် တိုင်းရင်းသားတွေကော ၊
တရုတ် ကုလားစပ်တွေကော ၊ ဘာသာခြား တွေကော ကိုပါ ၊
ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ ကိစ္စကို ပြောနေတာပါ ။
အဖြစ်အပျက် နှစ်ခုက ပြောင်းပြန် ဖြစ်စဉ်ပါ ။
“လူများစု လူဖြူတွေ ကြားထဲမှာ နေရရှာတဲ့ ၊
လူများစု လူဖြူတွေက ၊ လူနည်းစု အဘော်တွေကို အထူး အခွင့်အရေးပေးနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ ။“
အဘရေ လူများစုလူနည်းစုဆိုတာ ကမ္ဘာမှာမရှိတော့ဘူး အုပ်ချုပ်မှု နည်းစနစ်မမှန်ရင် လူ“လည်”လူနည်းစုကလည်း လူ“အ”လူအများစုကို နှိပ်ကွပ်နေမှာပဲ။ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှန်ရင် နည်းနည်းများများပူစရာမလိုပါ။
အဲဒီခေတ်တုန်းက ဘာစနစ်တွေများ ဘယ်လောက်ကောင်းခဲ့လည်း။ တရုတ်ပြည်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ် စသည်မှာ ချမ်းသာသူများထံမှ ပြည်သူပိုင်သိမ်း ပညာတတ်တွေ လယ်ထဲဆင်း လယ်ထွန်ခိုင်းပြီးရင် သတ်ပစ် အများကြီးရှိတယ်။ အဘအဲဒီနိုင်ငံတွေသွားနေခဲ့ရင် ဒီထက်ဆိုးနိုင်မယ်။ အခုခေတ်လည်း မြန်မာပြည်မှာ သက်သာလာတာသာရှိတာ မကောင်းသေးပါဘူး။ နောက်တစ်ခု indigenous peopleတွေ အဘော်ရီးဂျင်းတွေဟာ တစ်ချိန်တုန်းက အရမ်းကို နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်။ အမျိုးပျောက်လုနီးပါပဲ။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Kevin Rudd ကတောင် အခမ်းအနားနဲ့ပြန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ အခုလည်း ပညာတတ်တွေ တော်တော်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ အဲသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသား အားလုံးဟာ အခွင့်အရေးပေးသင့်တာကို ပြောတာပါ။ နောက်တစ်ခုပြောမယ် အော်ဇီမှာပညာ တော်တိုင်းလည်း မာန်ထောင်လို့မရဘူး/အလုပ်မခန့်ဘူး။ စီးပွားရေး တော်တိုင်းလည်း လက်ဝါးကြီးလုပ်လို့မရဘူး။
(ဒါတောင်အနည်းအကျဉ်းလေးတော့ရှိသေးပုံရတယ်)။ အားလုံးညီတူမျှတူရှိတယ်။ သူ့အချိန်နဲ့သူ ပရိုမိုးရှင်းရမယ်။
ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေအများကြီး ရထားလို့ ရုံးတစ်ရုံးမှာ မန်နေဂျာမဖြစ်နိုင်သလို၊ မန်နေဂျာတွေ တစ်ချို့ဆို ဘာဘွဲ့မှတောင် မရှိဘူး ၁၀တန်းလို ပညာအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်။လုပ်သက်နဲ့သာ တက်တာများပါတယ်။ ဟိုးထိပ်အထိ ရောက်ချင်ရင်တော့ အနဲအကျဥ်းလိုလိမ့်မယ်။ ဘွဲ့တွေသိပ်များရင် သူနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့နေရာပဲလျောက်လို့ရပါတယ်။ ပြောချင်တာက အဲဒီအချိန်က ဘာစည်းကမ်းမှာ မရှိ လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိတဲ့လူ၊ စီးပွားရေးလုပ်တတ်တဲ့သူက လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ အလွယ်လေးပဲ။ အဘ ပြောသလိုဆိုရင် “လက်ရည်ချင်းကွာ”တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်လေ။ သေချာပြန်စဉ်းစားနော်။ အဘပြောသလို “မြန်မာပြည်ကလူတွေ တစ်မျိုး နားလည်နေမှာစိုးလို့ ရှင်းပြပါရစေ ။” ဆိုတာက ရှင်းပြစရာမလိုဘူး အဘရယ်..အဘောရီးဂျင်းတွေလိုပဲ ဗမာက ကြီးမားတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေကြားမှာ နေနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားအမျိုးစုံရှိတဲ့ နိုင်ငံပါ။၁၃၅မျိုးကို တကယ်ပြန်ခွဲကြည့်လိုက်ပြီး အဘတို့နဲ့ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ ဘယ်လူမျိုးဦးရေကတိုးတက်လာပြီး(ပညာရေးမှာပါ) ဘယ်လူမျိုးဦးရေကနိမ့်ကျသွားလည်းဆိုတာ။ အဲဒါဆိုရင်လည်း အဘပြောအုံးမလား ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး မင်းတို့လူမျိုးကိစ္စလို့?
“အခု မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စက ၊ လူများစု ဗမာတွေကသာ ချုပ်ကိုင်ထားပြီး ၊
ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ ကိစ္စကို ပြောနေတာပါ ။”
အဘရေးး ထပ်ပြောပြန်ပြီ လူများစု ဗမာတွေက ချုပ်ကိုင် ဖိနှိပ်တယ် တဲ့ ဘယ်လိုများရှင်းပြရမလဲ၊ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဘောင်ထဲက မကြည့်ပါနဲ့လို့။ အဘရေ မြန်မာအများစုနေတဲ့ အညာမြေလတ်မှာ ဆိုရင် ဥပမာ- မကွေးတိုင်းမှာ မြန်မာအများစုနေတဲ့ တောင်တွင်းကြီး ရေနံချောင်း မကွေးမြို့ စသည်မှာ ၉၀% သော မြန်မာစစ်စစ်နှင့် တရုပ် ကုလားများသည် တပြေးညီတည်းနေထိုင်နေကြပါသည်။မြန်မာတွေ စားသလိုလည်းသူတို့လိုက်စားပါသည်။ မန္တလေးသားတွေ ရန်ကုန် အလုပ်ထဲမှာခင်လို့ကြည့်လိုက်တာ မြန်မာနဲ့ တရုတ် တွေ(အခုမှ ငွေပေါက်ပြီးဝင်လာတာတွေပြောတာမဟုတ်ပါ) ချစ်နေလိုက်ကြတာ..သွားအတူ လာအတူ။ ကိုယ်နဲ့တောင် မြန်မာအချင်းချင်း စကားမပြောဖြစ်ဘူး။ တရုတ်တွေကလည်း လေသံကအစမန္တလေးသံပေါက်နေတယ်။ သူတို့တွေ စင်္ကာပူ တစ်ပြုံလုံးရောက်သွားတာ
သူတို့အချင်းချင်းပဲပေါင်းတယ်။ တရုတ်တွေကလည်း ငါတို့တရုတ်အချင်းချင်းတွေ့ပြီဆိုပြီးသွား မပေါင်းဘူး။ မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တာ။ တယောက်ဆိုရင် လူကြီးလူကောင်းဆန်တယ်တောင်ပြောရမယ်။ မန္တလေးက
မြန်မာကောင်တွေ မိန်းကလေးတွေအကြောင်း မဟုတ်တာပြောရင် ဘယ်တော့မှဝင်မပါဘူး။ အပေါက်ဆိုးတဲ့ မိန်းမမျိုးဆိုရင်တော့ သူလည်းအတင်းဝင်တုတ်တာပေါ့လေ။ သူလည်းခံစားချက်ရှိပေသကိုး။ အဓိကပြောချင်တာက ဗမာ ဗမာနဲ့
မပြောစေချင်ဘူး။ မြန်မာအစိုးရလို့သာပြောသင့်တယ် လို့်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အတွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်လို့ ဘယ်သူတွေချုပ်ကိုင်ထားလည်း ဆိုတာ အဘလည်း အသေအချာမသိဘဲနဲ့။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ အခုဆို ဗီယက်နမ်ဟာ တကယ်တမ်းကြတော့ တရုတ်တွေက အစိုးရပိုင်းကို(ဗီယက်နမ်တရုပ် ပြောတာပါ) ချုပ်ကိုင်ထားတယ်လို့ကြားပါတယ်။ ဖီဂျီမှာလည်း ကုလားတွေဟာ အစိုးရပိုင်း/အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာကျွန်းသားအစစ်တွေထက်များကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
” တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင် Falun Gong ဆိုတဲ့ ဘာသာရေး အဖွဲ့ကိုနှိပ်စက်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေဆဲပါပဲ။
မိုးပြာကိစ္စ မတရားဘူးပြောနေကြသူများပါ စိတ်ဝင်စားရင် ရှာကြည့်ပါ။
တရုတ်နဲ့ ဗမာ ဘယ်သူကခေတ်ရှေ့ကိုရောက်နေသလဲ ”
ဒီလို မတရားမှုတွေကိုပြုနေတဲ့ ကွန်မြူနစ် တရုတ်ပြည်ကြီးကို ၊
အဘ ဘယ်တုန်းကမှ အကောင်း မပြောခဲ့ပါဘူး ။
အခုလောလောဆယ် တရုတ်က ပိုချမ်းသာ ၊ ပို ခေတ်ရှေ့ကိုရောက်နေတာနှင့်ပဲ ၊
မြန်မာတွေလဲ ၊ တရုတ်တွေလိုပဲ လူ့အခွင့်အရေးမရသင့်ဘူး ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။
အဘတို့ ဦးတည်သွားနေတာကလည်း ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေးပါ ။
မတရားမှုတွေကိုပြုနေတဲ့ ကွန်မြူနစ်စံနစ်ကို သွားနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
အဘ လည်း မိုးပြာဝါဒ နှင့် မွတ်ဆလင် ဘာသာကို မကိုးကွယ်ပါဘူး ။
သို့သော် ၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ( မိုးပြာ ဖြစ်ဖြစ် ၊ မွတ်ဆလင် ဖြစ်ဖြစ် ) ကိုတော့ ၊
အပြည့် အဝ ထောက်ခံပါတယ် ။
မိုးပြာ ကိုးကွယ်လို့ ဖိနှိပ်မယ် ဆိုရင်တော့ လုံးဝ လက်မခံပါဘူး ။
အဘရေ.. ဖိနှိပ်တာခံနေရမယ်ပြောတာမဟုတ်ပါ။ မူဆလင်လည်း တစ်ခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင် အများကြီးလွပ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဘရေ သြစတြေးလျမှ မူဆလင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထက်တောင် အစောကြီးရောက်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။မသေချာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနဲဆုံးတော့ မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်မှာပါ။ ဗလီ ဘယ်နှစ်ခုရှိလည်းဗျာ။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက အစ်အတွက်နွားသတ်တာ လွပ်လွပ်လတ်လတ် လမ်းဘေးမြေကွက်လပ် ခြံဝင်းအတွင်းမှာ သတ်တာလည်းမြင်ဘူးခဲ့သလိုပဲ။
အဘနေတဲ့နိုင်ငံမှာ အဲသလိုလုပ်လို့ရလား။မသိလို့မေးတာနော်။ အဘရေ ညနေဆို ရန်ကုန်မှာလို လော်ကြီးတွေနဲ့ ဗလီတခုနဲ့တစ်ခုကြားအောင် အော်တာမျိုးလုပ်လို့ရသလား။ မသိလို့မေးတာနော်။ သူ့ဟာနဲ့သူ အထိုက်အလျောက်တော့ရှိပါတယ်။ အဘပြောတဲ့ မိုးကောင်းကင် ကတော့တာတော့မသိဘူး။ ပေါင်ချိန်ကားထဲမှာ
မိုးမြေ ကတော့တာတော့ တီဗွီထဲမှာတောင်ပြတယ်။ တရုတ်ကားတွေထဲမှာ ဘာကတော့ ညာကတော့တာတွေလည်းပြတယ်။ ကျွန်တော်ခေါက်ဆွဲကြော်ကြိုက်လို့ သွားသွားဝယ်စားတဲ့ ကမ္ဘာအေးလမ်းမ အင်းယားကန်ရှေ့က ဘုံကျောင်းမှာလဲ တရုတ်ပွဲ ကတော့ပွဲ တွေလွပ်လွပ်လပ်လပ် လုပ်နေတာတွေ့ဖူးခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ မူဆလင်ဘာသာပဲ အယူအဆကွဲလို့ ဆိုပြီး ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် သွားပြီးတိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးတာ လူပါသတ်သွားတာ ၃ယောက်လားသေသွားတယ်(မသေချာ) ကျန်တဲ့လူတွေတော့ ဒဏ်ရာပဲရတယ်။ ဆဒမ်လက်ထက်က ရှားရီးယားမူဆလင်တွေကို နှိပ်စက်တာ/သတ်တာ
နဲနဲနောနော မဟုတ်။ ရှားရီးယားဆိုလို့ ရန်ကုန်မှာ မူဆလင်ပွဲတစ်ခု သူတို့ရဲ့ကြောကို သူတို့ ကြာပွတ်မျိုးစုံနဲ့ ပြန်ရိုက်တဲ့ပွဲ (ဘာအယူအဆနဲ့လည်းတော့မသိ) သွေးထွက်တဲ့အထိ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရိုက်တာနော်။ အဲဒီပွဲမျိုး အမေရိကားမှာ လမ်းမပေါ်မှာ ကျင်းပခွင့်ပြုပါ့မလား?? ပြောချင်တာက လုပ်ပိုင်ခွင့် သူ့နေရာနဲ့သူရှိတဲ့ အကြောင်း၊ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်နေတာ မဟုတ်။
နောက်ပြီး အခုအချိန်ဟာ နကိုရှိတဲ့ ဘာသာလေးမျိုးနဲ့ပဲ နေသင့်ပါတယ်။ ပြသနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင် ဖြစ်နေရတဲ့ အထဲ တခြားဘာသာတွေထပ်ဝင်လာရင် အခြေအနေတွေ ပိုရှုပ်ထွေးနိင်တယ်။
တစ်ချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တကယ်အားလုံးလွပ်လပ်ခွင့်တွေရပြီဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ၀င်ချင်တိုင်းဝင်လို့မရပါ။ ဘာသာဂိုဏ်း အသစ်တွေထောင်၊ သူတို့ကိုသူတို့ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်အောင်လုပ် ပြီး တဂိုဏ်းလုံး အဆိပ်သောက်သေတဲ့ဂိုဏ်းကသေ၊ လက်နက်တွေစု မိန်းမတွေယူ မုဒိမ်းကျင့် ကလေးတွေမွေး ပြီး ရဲလာဖမ်းလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံမှ “ဘို”လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ လူတွေရဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်လေ။ မြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ဆိုရင် အဲဒီလိုဝင်ဖို့ အလွယ်လေး။အဲဒီတော့ “မလောင်ခင်ကြိုတားထားတာ အကောင်းဆုံးပဲ” အခုအချိန်မှာငြီမ်းနိုင်တဲ့ အင်အားအရမ်းနဲနေတယ်လေ။ နောင်အဆင်ပြေရင် Tom Cruise ကလည်း Scientology မြန်မာပြည်မှာ လာဖွင့် ပေးပါမယ်တဲ့။(တကယ်မပြောပါဘူး)။
နောက်ဆုံး အနေနှင့် ပြောရရင်တော့ ၊
လူနည်းစု ကရင် ၊ ကချင် ၊ မွန် တိုင်းရင်းသားတွေကော ၊
တရုတ် ကုလားစပ်တွေကော ၊ ဘာသာခြား တွေကော ဟာ၊
ခွဲခြား ဖိနှိပ်ခံနေရတာကို မြင်လောက်ပါပြီ ။
ပြဿနာမှန်သမျှရဲ့ အဆုံးမှာ ပြောလေ့ရှိတာက ၊
အဲဒါတွေဟာ ကျနော် ကျမ လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဗမာ လူမျိုးကို ကိုယ်စား မပြုပါဘူး ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ ။
အဘတို့ လူနည်းစု ( တိုင်းရင်းသား ၊ ဘာသာခြား ၊ တရုတ် ကုလားစပ် ) များရဲ့အမြင်မှာတော့ ၊
မဆလ ၊ နဝတ ၊ နအဖ ခေတ် အဆက်ဆက်မှာ အစိုးရ နာမည်သာ အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတယ် ၊
နောက်ဆုံးမှာတော့ အစိုးရ ဆိုတာ ဗမာလူမျိုးတွေကပဲ အုပ်စီးပြီး ၊
အဲဒီလို ဖိနှိပ်ခြုပ်ချယ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ပုံစံတူ ( ပုံစံတူ ) တောက်လျှောက် အလုပ်ခံခဲ့ရတာပါ ။
အဲဒီမှာ ၊ လူနည်းစုတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဗမာတွေ မတရားလုပ်တယ်လို့ မြင်ပြီးနေပါပြီ ။
( ဗမာတွေကတော့ မမြင်သင့်ဘူး ပြောမှာပဲ ၊
လုပ်တဲ့သူက လုပ်သွားပြီး ၊ ဒီလိုလေး ပြောရတာ လွယ်ပါတယ် ။
ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေက ဖြေဖျောက်ဖို့ ခက်လှပါတယ် )
အဲဒီ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ရင်ထဲမှာ အမြဲ စွဲ ကျန်ခဲ့တာတွေပါ ။
ဇာကနာ နှင့် မင်းကိုနိုင် ပြောသလိုပေါ့ ၊
ခွင့်လွှတ်လို့တော့ရပါတယ် ၊ မေ့ပျောက်လို့တော့ မရပါဘူး ။
ခွင့်လွှတ်ချင်တယ်ဆိုတာတောင်မှ ၊ တောင်းပန်တဲ့သူက မရှိပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ အခုခက်နေတဲ့ပြဿနာက ၊
မတရား ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့သူတွေက ၊ အခုထက်ထိ သူတို့ ဖိနှိပ်မိပါတယ်လို့ ဝန်မခံသေးတာပါ ။
သူ လုပ်ခဲ့တာ ၊ ငါ မဟုတ်ဘူး တို့ ၊ ဟိုနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုပဲလုပ်နေတာပဲ တို့ ။
အဲဒီလိုသာဆိုရင်တော့ ၊ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုက ဝေးနေအုန်းမှာပါ ။
နံပါတ် ၁။ ခွဲခြားဖိနှိပ်ခံရတာမြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးပါ။မြန်မာအားလုံးကိုမှ ၀ါးလုံးချီးသုတ်မရမ်းစေချင်။စကားအနိုင်လိုက်ပြောနေခြင်းထက် အမှန်ကိုမြင်စေချင်။ ရန်ကုန်မြို့ဟာပြောမယ်ဆိုရင်
မွန်အပိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောမလား။ အခုအဲဒီမှာ မြန်မာတောင် တော်တော်နည်းသွားပြီ တရုတ် ကုလား ရခိုင် ရှမ်း ကရင် စသည်တို့ရဲ့ တစ်မျိုးစီလူဦးရေဟာ မြန်မာလူဦးရေနဲ့ အပြိုင်ပါ။ တစ်ချို့ ဆိုပိုတောင်များအုံးမယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကော ဘယ်သူတွေပိုများလည်း?? ဒါတွေအားလုံးဟာလည်း စနစ်ကောင်းမရှိလို့ခံနေရတာ။
နံပါတ် ၂။ “ပြဿနာမှန်သမျှရဲ့ အဆုံးမှာ ပြောလေ့ရှိတာက ၊
ဗမာ လူမျိုးကို ကိုယ်စား မပြုပါဘူး ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ ။”
ကျေးဇူးပြု၍ စိတ်ဓာတ်ကလေး မြင့်မြင့်ထားပေးပါ။ အဲဒီလို မပြောလို့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဂျပန်တွေကိုရော တစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေ/နှိပ်စက်ခဲ့တာတွေ အသစ်ကပြန်စပေး/အကုန်လျော်ပေး လို့ဆိုရင် သူတို့ကလက်ခံမလား။
အဓိပ္ပါယ် မရှိတာတွေ မပြောပါနဲ့။ အဲဒီစကားမျိုး ဂျာမဏီမှာ သွားပြောရမလား။ ဟစ်တလာလုပ်ခဲ့တာတွေ အကုန်ပြန်လုပ်ပေးပါလို့။ဂျင်ဂျစ်ခန် လူသတ်မုဒီမ်းကျင့် နယ်ချဲ့ခဲ့တာ(တရုတ်တွေကိုပါ) ဟဲ့ မွန်ဂိုမတွေ မုဒိမ်းပြန်ကျင့်မယ် ပြီးရင်နင်တို့ ကမ္ဘာပတ်ပြီးလျော်ပေအုံးလို့ပြောမလား။
ထပ်ပြောမယ် အဘဘောင်ကျဉ်းလေးခတ်ပြီးကြည့်တာကို ရပ်သင့်ပြီ။
“အဘတို့ လူနည်းစု ( တိုင်းရင်းသား ၊ ဘာသာခြား ၊ တရုတ် ကုလားစပ် ) များရဲ့အမြင်မှာတော့ ၊
ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေက ဖြေဖျောက်ဖို့ ခက်လှပါတယ် )”
အဘရေ အမြင်ကျယ်တဲ့ သူ အခြေအနေအားလုံးကို နားလည်တဲ့လူဆိုရင် မမြင်ပါဘူး။စကားမစပ် အဘရေ ဗိုလ်ချုပ်အေဘယ်တို့၊ ဒေါ်ကေဂျာနူးအဖေ ကချင်ဗိုလ်မှုးချုပ်ကြီးတို့ဟာ တပ်ထဲကပါပဲ။ သူတို့နဲ့အဆင်ပြေရင် သူတို့ကတော့ခန့်မှာပဲလေ။ မှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မာ စစ်ဗိုလ်များ ချောင်ထိုးခံထားရတာလည်းအများကြီးပဲ။မန္တလေးမှာ
ပါမောက္ခချုပ်ကို ၀ ငြိမ်းချမ်းရေးက သေနတ်နဲ့လိုက်ပစ်တယ်တဲ့။ ကချင်/ရှမ်းငြိမ်းချမ်းရေးတွေ ကလဲ တစ်ချိန်က ရန်ကုန်မန္တလေးတွေမှာ သောင်းကျန်းမှုတွေရှိခဲ့တာပဲ။ဘယ်အဖွဲ့တွေလည်းတော့မသိဘူး။အခုလည်း အစိုးရနဲ့ ပလဲနံသင့်ဖြစ်ပြီး သောက်သောက်လဲချမ်းသာ နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီးပါ။ ရခိုင်နဲ့မွန်နဲ့တော့ မပါဘူးထင်တယ်။တစ်ချိန်တုန်းက ရန်ကုန်မှာဆိုရင် လိုင်စင်နံပါတ် မပါတဲ့ကား အထူးအဖွဲ့ ဘာညာ တဆိပ်ပါတဲ့ ကားတွေဆို လူတိုင်းသတိထားရတယ်။ ရဲတောင်အဲဒီ ကားတွေမဖမ်းရဲဘူး။ အဲဒါလဲ မြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးလုပ်တာပဲလား။ ခံရတာလည်းမြန်မာတွေပါတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားပါအုံး။
မကောင်းတာတွေတော့ မြင်တယ် အခုအဘပြောတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဇာဂနာနဲ့ မင်းကိုနိုင်အပါအ၀င်
ထောင်ကျအနှိပ်စက်ခံခဲ့တဲ့ လူငုတ်တုတ်ကြီးတွေက မြန်မာတွေ မဟုတ်ဘူးလား။ သူတို့ကိုကော ဘယ်သူတွေက ဘယ်တုန်းကတောင်းပန်တာခံခဲ့ရလဲ။ ဒါပေမဲ့ ဇာဂနာက ခွင့်လွတ်တယ်တဲ့။ သူ့လို “လက်ရည်ကွာတဲ့” မြန်မာတစ်ယောက်ကတောင်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရင်။ အဘလို အခုအချိန်မှာ အခြေအနေ အရပ်ရပ်သာနေတဲ့ လူက ဘာအတွက် တောင်းပန်မဲ့သူစောင့်နေတာလဲ? ဦးနေ၀င်း အုတ်ဂူပဲ ပြန်ဖောက်ပေးရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ဇာဂနာက သူ့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို သိတယ်နော်။ သိသိကြီးနဲ့ခွင့်လွတ်တယ်။ ကောင်းတာလုပ်တဲ့မြန်မာတွေကျတော့ မျက်ကွယ်ပြုထားတယ်။ မကောင်းတာလုပ်တာတွေပဲ အသားပေးပြောနေတယ်။ ဖိနှိပ်တဲ့ကိစ္စ ၀န်ခံစရာကိုမရှိဘူး..အဘ။ အဘအတွေးလေးတွေ သာပြင်သင့်တာပါ။ လူကရှေ့ရာက်ပြီး အတွေးကနောက်ရောက်နေတာ မဟုတ်သေးဘူး။ အဘကို ”ဟိုနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း လုပ်တာပဲ” မပြောလို့၊ အဘ နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံတွေ ပို့စ်လုပ်ရင်တောင် အားရ၀မ်းသာ မျှော်ကြဖတ်ကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ အရမ်းကိုခေတ်နောက်ကျနေတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာလူငယ်တွေ တစ်ဝက်ကျော်တော့ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ယှဉ်ပြရတယ်ဗျို့၊နောက်တခုက ကျုပ်တို့ ဗမာလူမျိုးအဖြစ်က ဘာပြောပြောကိုယ့်အမှားချဉ်းပဲ အောက်မေ့နေတာ။ သိမ်ငယ်တတ်ကြလွန်းလို့။ အဘကိုယ်တိုင်ကလည်း အမြဲတမ်း တဖက်သတ်ဘောင်ကန့်ပြီးပြောနေလို့ပေါ့ဗျာ။ အဘလည်းသိအောင် တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ လည်းဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာ။ ပီးတော့ ငါမဟုတ်ဘူး၊ သူလုပ်ခဲ့တာ ဆိုပီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ အဘ တဖက်သတ် မတရားမမြင်အောင် ရှင်းပြနေတာ။ ဟိုနိုင်ငံမှာ လုပ်လို့ လိုက်လုပ်ဖို့
လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒီကိစ္စနဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း ဝေးခြင်းနဲ့လည်း ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ ထပ်ပြောအုံးမယ် အဘရေ ဒီမိုကရေစီသွားမယ်ဆိုရင်လေ။ ကိုယ့်ရဲ့ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးကို ဖြုတ်ပြီး သူများရဲ့ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေပါ ကူပြီးဖြုတ်ပေးရတယ်ဗျာ။ကိုယ်ကိုတိုင်က တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာနေပြီး ဘောင်မဖြုတ်ပဲပြောနေရင်တော့ ကျန်တဲ့ မတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကလူတွေလည်း ဘောင်ဖြုတ်ဖို့ခက်လိမ့်မယ်။
အဘတို့ ရင်ထဲမှာ တောက်လျှောက် ဘယ်လို ခံစားခဲ့ရတယ် ဆိုတာ ၊
ကိုရင်တို့ သိလောက်ပါပြီ ။
အဘ ကို တရုတ်မွန်စပ် အသိုင်းအဝိုင်းကနေ မြန်မာပြည်မှာ မွေးလာတာ ၊
အဘ အပြစ် မဟုတ်ပါဘူး ၊ အဖိနှိပ်ခံဖို့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။
အဘ တို့ တရုတ်လို့ ခွဲခြား အခေါ်မခံချင်ပါဘူး ။
သူတို့ ခေါ်တာ ခံခဲ့ရတာပါ ။
Repeat ( တရုတ်လို့ သူတို့ ခေါ်တာ ခံခဲ့ရတာပါ )
အဲဒီ အခါမှာ ၊ တရုတ် တရုတ် လို့ထည့်ပြောသွားတာ တွေဟာ ၊
လူနည်းစု အဖိနှိပ်ခံ လူတန်းစားရဲ့ တမင် မာန်သွင်း ပြောစကားပါ ။
အဲဒီ သဘောကို ၊ အဘတို့ရဲ့ ကြုံးဝါးခဲ့တဲ့ ၊
အောက်ပါ စကားစု ထဲမှာ ထင်ထင် လင်းလင်း မြင်နိုင်ပါတယ် ၊
အဲဒီ ဒါဏ်ကို တောက်လျှောက်ခံခဲ့ရတဲ့ ၊
တရုတ် ကုလားစပ်တွေကော ၊ ဘာသာခြား တွေကော ၊
အကုန်လုံး ရဲ့ ရင်ထဲမှာ နည်းတာ များတာပဲ ကွာပါတယ် ။
တစ်ချက်ပဲ ထောက်ပြမယ် နော် ။
မြန်မာပြည်မှာ ရှိရှိသမျှ တိုင်းရင်းသား အကုန် ၊
လက်နက်စွဲကိုင်ပြီး ပုန်ကန်နေကြတာ ၊ ဘယ်သူမှားတယ်လို့ ထင်ကြသလဲဟင် ။
အဘရေတစ်ခုချင်းဖတ်ပြီး မန့်လာတာ နောက်ဆုံးကြမှပဲ လန်ထွက်သွားတယ်။ “တရုတ်မွန်စပ်”တဲ့။ အဲဒါများ ဘာတွေပြောနေတာလဲ “ဟိုမှာကတရုတ်တရုတ်ချင်းပြိုင်ရတာတို့” “လက်ရည်ကွာတယ်”တို့။ အဘပြောတဲ့ စကားတွေက တရုတ်ဖြစ်လို့ ဂုဏ်ယူမှုတွေများနေတယ်။ မွန်စပ်တဲ့ အကြောင်းကိုရှေ့မှာ လုံးဝ မပြောပဲ အခုနောက်ဆုံးကျမှ ပေါ်လာတယ်။ မွန်လို့ပြောရမှာရှက်လို့လား။ မြန်မာတွေကိုနာခြင်းနာ တရုတ်အနေနဲ့ နာမဲ့အစား တိုင်းရင်းသား မွန်အနေနဲ့ပိုတောင်စိတ်နာသင့်တာတွေရှိတာကို။ နားမလည်နိုင်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ မို့လို့ နှိမ်တဲ့လူက မြန်မာဖြစ်ဖို့များပေမဲ့။ ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကိုမြင်တတ်ပါ။ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ
ကျွန်တော် တရုတ် ကုလား ခေါ်တာပဲ။ သူတို့မနာပါဘူး။ အေး ကိုယ်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိတဲ့လူတော့သွားမခေါ်ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ လမ်းထဲမှာ ဖန်ပုလင်းဘူးခွံတွေရောင်းရင် တရပ်ကွက်လုံးက ခေါ်တဲ့ “ကုလားအဖိုးကြီး” ဆီမှာပဲရောင်းတယ်။မြန်မာ အထမ်းသယ်တွေကို မရောင်းဘူး။ အဖိုးကြီးကသဘောလည်း ကောင်းတယ်၊ဈေးလည်းမှန်တယ်။ သူ့ကိုခေါ်တာသူလည်း မနာပါဘူး။ တရပ်ကွက်လုံးက သိနေကြတာကိုး။ ဒါတွေက ကိုယ်ကြီးပျင်းလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေနေပေါ်မူတည်ပြီး ခံခဲ့ရတာတွေလည်း ရှိမှာပဲ။ အဲဒါအတွက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တရုတ်အစစ်ကြီးလိုသတ်မှတ်၊ပြီး မြန်မာတွေမုန်းနေရင်တော့ မ Ayeလို လူမျိုးရေးကင်းတဲ့စိတ်ကလေး ထားတတ်အောင်ထားနိုင်ရင် ရင်ထဲကခံစားရတာတွေပြေမှာပါ။ မ Aye အဖေကိုကြည့် ဖိနှိပ်ခံရတဲ့ အချိန်မှာကြိုးစားတယ်။ အခုအချိန်မှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဘာဝနာပွားများနေတယ်။သူလည်း တစ်ချိန်က
စစချင်းမှာတော့ မြန်မာတွေဆိုပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ။ အခုတော့ အဲဒီမြန်မာပြည်ကြီးမှာ ပဲအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်။(အဘရောပဲပေါ့) အခုဘာဝနာအားထုတ်တယ်။ လူကိုလူလို့မြင်လာမယ်။အတ္တစွဲကင်းသွားပြီ။ အဘ ဘ၀က ဦးဇာဂနာလို မြေကြီးထဲမြုပ်ခံရပြီးခေါင်းပေါ်က ကားဖြတ်မောင်းခြင်းခံရတာလဲ မဟုတ်။ ပြီးတော့ ကရင်၊ကချင်၊မွန်တွေ ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အဘထက် အဆပေါင်းများစွာဆိုးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဘတစ်ယောက်ထဲသာ မြန်မာတွေဆိုပြီး ဖြစ်နေတာ။ ရန်ကုန်မှာ ဘယ်လူမျိုးသွားမေးမေး အစိုးရလို့ပဲပြောမှာပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်က လူမျိုးစုံနဲ့ပေါင်းလာတာ။
ဘယ်သူမှ မြန်မာတွေ မကောင်းဘူးလို့မပြောဘူး။ နယ်ကတက်လာတဲ့ ကရင်တွေတောင် အနေကြာလို့ သဘောပေါက်သွားရင် တကယ်တန်း ဘယ်သူတွေ မကောင်းတာလည်းသိသွားတယ်။ ခက်တာက အဘက ဒီစနစ်ဆိုး ဆိုတာကို နားမလည်ဘူး။ကျွန်တော့်အထင်မမှားဘူးဆိုရင် အဘက မြန်မာနဲ့လည်းသိပ်မပေါင်းဖူးဘူး အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း မြန်မာမကောင်းပြောတာများတယ်။ ကျွန်တော် အရှေ့မှာပြောခဲ့သလို မြေမနင်းသားဆိုတာ အိမ်နဲ့ကား၊ ကားနဲ့ကျောင်း/အလုပ်/ရှော်ပင်ထွက် တာပြောတာ။ ပြောရရင်တော့ ရပ်ကွက်ထဲ လမ်းဘေးထဲ ဆင်းမလေ့လာဘူးတဲ့ လူမျိုးပေါ့။ လူကုံထံ အသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတွေကိုပြောတာပါ။
“တစ်ချက်ပဲ ထောက်ပြမယ် နော် ။မြန်မာပြည်မှာ ရှိရှိသမျှ တိုင်းရင်းသား အကုန် ၊
လက်နက်စွဲကိုင်ပြီး ပုန်ကန်နေကြတာ ၊ ဘယ်သူမှားတယ်လို့ ထင်ကြသလဲဟင် ။”
အဘရေ ကြားကဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြေဇာပင်လေးတွေကြည့်ပြီး လက်နက်စွဲပြီးပုန်ကန်လိုက် အလင်းဝင်လိုက် လုပ်နေတဲ့ လူတွေကော၊ တိုက်လိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ ဒီဖက်ကလူတွေရော “အာဏာရူး စည်းစိမ်ရူး ရူးနေတဲ့ အ်ရူးတွေ”လို့ ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
နိဂုံးချုပ်ပြောချင်တာကတော့ ပထမဦးဆုံးမန့်ခဲ့တုန်းကတော့ သြော် သူ့ခံစားချက်ကလေးပြောရင်းနဲ့ နဲနဲလေး လူမျိုးခွဲခြားတဲ့ပုံစံပေါက်သွားတယ်လို့ ထင်ပြီးမန့်ခဲ့တယ်။ပြီးရင်တော့ ပြီးသွားမှာပါလို့ထင်တယ်။ နောက်ပိုင်း.. မန့်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ပြောတာတွေ့တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အထင်ကြီးပြီး သူများကိုနှိမ်တယ်လို့ တွေ့လာရတယ်။
နောက်ဆက်တွဲကတော့ သူများတွေပါကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် ဆွဲသွင်းပြီး
မြန်မာတွေသာမကောင်းတာပါဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့မြင်တယ်။(အဲဒီပုံစံကတော့ ဘယ်တိုင်းရင်းသား အများစုကမှ ၀င်ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဘရေ) အရေးကြီးတာက ငါတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာနေတယ် ငါပိုသိတယ် သူတို့ပြောတာမှားတယ် ဖြစ်နေမဲ့ အစား သေသေချာချာပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်စေချင်တယ်။ ကိုယ်ပြောတာတွေဟာ သူတစ်ပါးကို ဘယ်လောက်နစ်နာစေမလဲဆိုတာ။ အခုဆိုကြည့် အဘကိုခင်ခင်မင်မင် တလေးတစားဆက်ဆံခဲ့တဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေ အနဲနဲ့အများတော့ ခံစားရမှာပဲ။
အဘကို အပြစ်မပြောပါဘူး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင် ဒီထက်တောင်ဆိုးနိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ မြင်သင့်တာကိုတော့ အမှန်ပဲမြင်စေ့ချင်တယ်။ ချိုတူးဇော် ဆိုတဲ့ လူရဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ you tube ကနေတင်ထားတဲ့ အန္ဒိယပြန်သွားတဲ့ မြန်မာပြည်က ပြည်သူပိုင်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကုလားမကြီးတွေကို အင်တာဗျုးထားတာ ကြည့်လိုက်ရတယ်။ သူတို့ပြောပြတာ ၀မ်းနည်းစရာ မြန်မာပြည်လည်းချစ်တယ်။
အဲဒီမှာပြောထားတာက ဗမာပြည်မှာနေရတာကောင်းတယ်တဲ့ အဲဒီတုန်းက မြန်မာတွေက အရမ်းရိုးသားကြတယ်တဲ့။ လုပ်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုလားပဲ။
အဘတို့လိုပဲ အသိမ်းခံရတာခြင်းအတူတူ သူတို့ကအကောင်းအဆိုးခွဲခြားတတ်တယ်။
မြန်မာအားလုံးကို ချီးသုတ်ရမ်းပြီး မပြောဘူး။ အဓိက ကတော့ attitude ပါပဲ အဘရယ်။
ကို garuda (ခ)လူတစ်ပိုင်း၊ငှက်တစ်ပိုင်း(အိန္ဒိယကဗိဿနိုးရဲ့ စီးတော်ငှက် ထင်တာပဲ ထားပါတော့)….ခင်ဗျားကိုလဲ အတော်လေးစားသွားပြန်ပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားပြောတာအားလုံးက အမှန်တွေချည်းပါပဲ။တစ်ကယ့် အမှန်တရားကိုလဲ အဘမြင်နှိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်က
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လဲ တစ်ကယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပါတယ်။ဒီ(ပိုစ့်)နဲ့လဲအခုပြော
ပြန်မလာလဲ မလွမ်းလောက်ပါဘူး။အခုတော့ အိမ်ရှင်ကို နှင်ချပြီးအတင်းတက်နေချင်လို့ကို သောက်မှု့တွေ
တက်နေရတာပါ။တရုတ်ကိုတရုတ်၊ကုလားကိုကုလားလို့ခေါ်တာ နာစရာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အမျိုးကို ကိုယ်မချစ်တာပါပဲ။ကျုပ်ကို ဗမာ(ဝါ)မြန်မာ လို့ကြိုက်သလောက်ခေါ်နှိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်အမျိုးကို ဂုဏ်တောင်ယူသေးတယ်ဗျာ။အဲလိုခေါ်တာကို ဖိနှိပ်တယ်ထင်ရင်တော့ တစ်ခုခုတော့လွဲနေပြီ။သေသေချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့လို့ ကိုယ့်စိတ်က ကိုယ့်ဘာသာရှက်နေတာလို့ပဲယူဆမိပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးး